မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: February 2008
လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲ - ဘီဘီစီ ကောက်ိုံတ်ခဵက်
လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲကို နယ်စပ်အဖြဲႚမဵားက ကန်ႚကကြ်NLD က အစိုးရကို တရားစြဲဆိုရန်ုကြိးစာူးခင်းဘီဘီစီ ကောက်ိုံတ်ခဵက်ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကက်ြမဲပေုးကဖိုႛ နယ်စပ်အေူခစိုက်အဖြဲႛမဵား တောင်းဆိုဦးရင်မောင်၊ ဘီဘီစီ (ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၈ ၂၀၀၈) ညပိုင်းအစီအစဉ် နယ်စပ်အေူခစိုက် ဒီမိုကရေစီရေးအင်အားစုတြေ၊ တိုင်းရင်းသားအရေးလုပ်ဆောင်ုကတဲ့ အင်အားစုတေကြူမန်မာ စစ်အစိုးရရဲႛ ၁/၂၀၀၈၊ ၂/၂၀၀၈ နဲႛ ၃/၂၀၀၈ တိုႛဟာ အမဵြိးသာူးပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီင်္ီတ်ြရေးကို ဦးတည်ူခင်းမရြိဘဲနဲႛ စစ်အာဏာရင်ြစနစ်တည်ူမဲရေးကိုပဲ ရြေးရနြေတဲ့အတကြ် လုံးဝလက်မခိံိုံင်ဘူး လိုႛ သဘောထားထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။ူပည်ထောင်စုမန်မိာိုံင်ငံအမဵြိးသားကောင်စီ (NCUB)၊ူပည်ထောင်စုမန်မိာိုံင်ငံ အမဵြိးသားင်္ီနြ်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB)၊ တိုင်းရင်းသားလူမဵြိးမဵားကောင်စီ (ူပည်ထောင်စုမန်မိာိုံင်ငံ) (ENC)၊ အမဵြိးသမီးမဵားအဖြဲႛခဵပြ် (ူမန်မိာိုံင်ငံ) (WLB)၊ူမန်မိာိုံင်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု (FDB) နဲႛူမန်မိာိုံင်ငံကေဵာင်းသားလူငယ်မဵားကန်ြဂရက် (SYCB)၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်မဵား ဆုံရပ် (NYF) စတဲ့အဖြဲႛတြေ စုပေၝင်း္ဘပီးတော့ ဒီနေႛထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ေုကညာခဵက်မြာူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆိံ္ဋခံယူကို တဖက်သတ်ကဵင်းပလာခဲ့ရင် တခဲနက် ကန်ႛကက်ြမဲပေး္ဘပီးတော့ လူထုဆိံ္ဋသဘောထားကို ထုတ်ူပန်ပေုးကဖိုႛူပည်သူလူထုကို တိုက်တနြ်းထားပၝတယ်။ ဒီထုတ်ူပန်ေုကညာခဵက်အတကြ်ေူပာခငြ့်ပုဂ္ဂိလ်ြတဦူးဖစ်တဲ့ NCGUB က ဒေၝက်တာ စန်းအောင်ကို ကဵနော် ဆက်သယ်္ဘြပီးတော့ ဘာေုကာင့် အဲဒီလိုတိုက်တနြ်းရတာပၝလဲလိုႛ စမေးတဲ့အခၝ ဒေၝက်တာ စန်းအောင် ။ ။ ပထမအခဵက်ကတော့ ဒီအေူခခံဥပဒေက အတုအယောင်အေူခခံဥပဒေပဲူဖစ်တယ်။ နံပတ် ၂ ကတော့ အခုပည်သူႛဆိံ္ဋခံယူပြဲဆိုတာလည်း ဒီ အတုအယောင်အေူခခံဥပဒေကို အတည်ူပဖြိုႛ ဋ္ဌကြိးပမ်းတာ ပဲူဖစ်တယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ဒီလို အတုအယောင် အေူခခံဥပဒေကို ကဵနော်တိုႛ လက်လည်းမခိံိုံင်ဘူး။ လုံးဝလည်း ကန်ႛကက်ြတယ်။ ဒၝပေမယ့် ကဵနော်တိုႛတကယ်တမ်ုးကည့်တဲ့အခၝကဵတော့ နအဖအနေနဲႛ ဘယ်လိုပဲိုံင်ငံတကာက ကန်ႛကကြ် ကန်ႛကကြ်၊ူပည်သူတေကြ ကန်ႛကကြ် ကန်ႛကကြ်။ တနြ်း္ဘပီးတော့လုပ်သြားမယ့် အနေအထားရြိတယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛ တကယ်လိုႛ အဲလိုမဵားဆက်္ဘပီးတော့၊ တကယ်တမ်ူးပည်သူႛဆိံ္ဋခံယူပြဲူဖစ်လာမယ်ဆိုရင်တောူ့ပည်သူတေအြနေနဲႛူပည်သူႛဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ ဆန်ႛကဵင်မဲပေးဖိုႛေူပာရတာူဖစ်ပၝတယ်။ူပည်သူတေနြေ္ဘပီးတော့ တကယ်တမ်း လိုက်ိုံင်တဲ့၊ူပည်သူတြေ တကမ်းတမ်းလုပ်ိုံင်တဲ့ လုပ်ငန်းကတော့ ဒီလိုပဲ VOTE NO ပေၝ့နော်၊ ကန်ႛကက်ြမဲပေိးိုံင်တဲ့အနေအထားမဵြိးလိုႛ ကဵနော်တိုႛူမင်လိုႛပၝ။ ဒၝကို ကဵနော်တိုႛတောင်းဆိုတာူဖစ်ပၝတယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ လာမယ့်လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ တကယ်တမ်း ဒီလို ကန်ႛကက်ြမဲတြေ သြားပေုးကမယ်ဆိုရင်ကော တကယ့်မ္တွတတဲ့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲူဖစ်လာလိမ့်မယ်လိုႛ ဒေၝက်တာစန်းအောင်တိုႛအနေနဲႛ မ္တွော်လင့်လိုႛလားခင်ဗဵ။ ဒေၝက်တာ စန်းအောင် ။ ။ အခုပည်တငြ်းအေူခအနေတေဟြာ ဘယ်လိုမြ တရားမ္တွတ္ဘပီးတော့ လတ်ြလပ်တဲ့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲူဖစ်ဖိုႛအတကြ် အေူခအနေ ပတ်ဝန်းကဵင်မရြိပၝဘူး။ အေူခခံဥပဒေကို ဝေဖန်တဲ့၊ ကန်ႛကက်ြတဲ့ ဆြေးြေိံးမြ တြေ ဒၝမမြဟုတ် ရေးသားတာ တစုံတရာူဖစ်ရင်တောင်မပြဲ ထောင်ဒဏ် အိံစြ် ၂၀ အထိ ခဵိုံင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲ ဥပဒေရြိတယ်။ နောက်တခု တကယ်လည်းပဲ ဒေၝက်တာ အောင်ခင်ဆင့်တိုႛကအစ တကယ်တမ်းေူပာတဲ့ ဆိုတဲ့သူ တေကြို အရေးယူ ထောင်ခဵခဲ့တာတေလြည်းရြိတယ်။ ဒီလိုလက်တေအြေူခအနေမဵြိးမြာ ဘယ်လိုမြ တရားမ္တွတတဲ့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲူဖစ်ဖိုႛဆိုတာတော့ မူမင်ပၝဘူး။ ဒၝပေမယ့်လည်း နအဖ အနေနဲႛ ဒီအတိုင်းပဲ တနြ်းသြားမယ်ဆိုရင် ကဵနော် တိုႛအနေနဲႛူပည်သူကို သူတိုႛတတ်ိုံင်သရြေႛ တတ်ိုံင်တဲ့နည်းလမ်းနဲႛူပည်သူအမဵားဆုံးလိုက်ိုံင်တဲ့နည်းလမ်း ကတော့ ဒီလို "NO" VOTE ထည့်တာပဲရြိမယ်လိုႛ ယုံကည်တာေုကာင့်မိုႛလိုႛ ဒၝကို တောင်းဆိုတာူဖစ်ပၝ တယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗဵ။ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့ ဒီမိုကရေစီအတိုက်အခံအင်အားစုတေရြဲႛ အသံတေကြိုကည့်ရင်ပေၝ့နော်၊ အထဲမြာရြိနေတဲ့ အဓိကအင်အားစုဋ္ဌကီူးဖစ်တဲ့ NLD အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵပြ် ကတော့ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲနဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့ သပိတ်မြောက်မလား၊ ဒၝမမြဟုတ် သြား္ဘပီးတော့ လူထုကို ကန်ႛကက်ြမဲ ပေးမလား၊ ထောက်ခံမဲပေးမလား စသည်ူဖင့် တိုက်တနြ်းတာမဵြိးတော့ မရြိသေးပၝဘူး ခင်ဗဵ။ အဲ့တော့ အခုလို လူထု ဆိံ္ဋခံယူပြဲကိုသြား္ဘပီးတော့ ကန်ႛကက်ြဆိံ္ဋမဲပေုးကဖိုႛ လူထုကိုတောင်းဆိုတဲ့ကိင်္စဟာ NLD က လိုလားခဵက်နဲႛ ကိုက်ညီပၝ့မလားခင်ဗဵ။ ဒေၝက်တာ စန်းအောင် ။ ။ ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛကတော့ NLD ဟာူပည်သူႛရဲႛမဲနဲႛ ရြေးကောက်ပြဲမြာ အိုံင်ရတဲ့ ပၝတီူဖစ်ပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛရဲႛ Movement ကို ခေၝင်းဆောင်နေတဲ့ Mandate ရထားတဲ့ အဖြဲႛအစည်ူးဖစ်ပၝတယ်။ ဒီအဖြဲႛအစည်းကန္ဘေပီးတော့ ဆုံူးဖတ်ခဵက်ခဵ္ဘပီးတော့ ခုနကလို Boycott ပေၝ့နော်၊ ဒၝကို လုံးဝလက်မခိံိုံင်ဘူး။ ဒၝကို သပိတ်မြောက်ုကပၝဆိုရင်လည်း ဒၝကို ကဵနော်တိုႛလိုက်နာမြာပဲူဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ကဵနော်တိုႛအခုအေူခအနေမြာ ပကတိအေူခအနေမြာ သုံးသပ်တဲ့အခၝကဵတော့ အဲဒီလို Boycott လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် နအဖအနေနဲႛ ဒီဆိံ္ဋခံယူပြဲ ကို မူဖစ်ူဖစ်အောင် သူတိုႛဖာသာလုပ်္ဘပီးတော့ အဲဒီမြာ မဲ တမဲပဲရရ၊ိံစ်ြမဲပဲရရ အဲဒီ တမဲိံစ်ြမဲနဲႛပဲ အတည်ူပသြာိးိုံင်တဲ့ အနေအထားမဵြိးလည်းရြိတာေုကာင့်မိုႛလိုႛ ကဵနော်တိုႛအနေနဲႛူမင်တာကတော့ ဒီ Boycott လုပ်တာထက် စာရင် ခုနကလိုပည်သူတေသြား္ဘပီးတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရဲရဲတင်းတင်းနဲႛူပည်သူႛဆိံ္ဋကိုဖော်ထုတ်ုကဖိုႛက ပ္ဘိုပီးတောူ့ဖစ်ိုံင်တယ်၊ အလားအလာရြိုံင်တယ်လိုႛယူဆလိုႛ ဒီလိုေူပာတာူဖစ်ပၝတယ်။ NCGUB က ဒေၝက်တာစန်းအောင်ူဖစ်ပၝတယ် ခင်ဗဵာ။ NLD က အစိုးရကို တရားစြဲဆိုရန်ုကြိးစာူးခင်းဦးမင်းထက်၊ ဘီဘီစီ (ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၉ ၂၀၀၈) ညပိုင်းအစီအစဉ် ၁၉၉၀ူပည့်ိံစ်ြတုန်းက ရြေးကောက်ပြဲကဵင်းပ္ဘပီး လတ်ြတော်ခေၞပေးမယ်လိုႛေုကညာထားခဵက်တေကြို ဖောက်ဖဵက် တယ်။ အစိုးရဘက်က တာဝန်ပဵက်ကက်ြတယ်ဆ္ဘိုပီး NLD က နအဖ စစ်အစိုးရကို တရားစြဲမယ့်အစီအစဉ်ပၝ။ ဒီအေုကာင်းနဲႛပတ်သက်္ဘပီးတော့ NLD ရဲႛူပန်ုကားရေးအဖြဲႛ၀င် ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဆက်သယ်ြမေုးကည့်ခဲ့တော့ သူက တရားစြဲဆိုဖိုႛစီစဉ်ရူခင်း အေုကာင်းအရင်းတေကြို အခုလို စရငြ်ူးပပၝတယ်။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ ၈၉ ခိုံစ်ြမြာထုတ်ူပန်ခဲ့တဲူ့ပည်သူႛလတ်ြတော် ရြေးကောက်ပြဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ အရူပည်သူႛ လတ်ြတော် ကိုယ်စားလယ်ြမဵားနဲႛူပည်သူႛလတ်ြတော် ခေၞယူကဵင်းပရမယ်ဆိုတဲ့အခဵက်ရယ်၊ တခၝ အမိန်ႛအမတြ် ၁/၉၀။ အဲဒီမြာ အပိုဒ် ၁၂ အရကလည်း ဒီလိုပည်သူႛလတ်ြတော်ကို ခေၞယူကဵင်းပပေးမယ်လိုႛ ၀န်ခံထားတဲ့အခဵက် ရယ်။ ဒီအခဵက်တေအြရ အစိုးရဟာူပည်သူႛလတ်ြတော်ကို ခေၞယူကဵင်းပပေးဖိုႛတာဝန်ရြိတယ်။ ဒၝ့အူပင်ကို နောင် ကဵင်းပမယ့်ူပည်သူႛလတ်ြတော် ရြေးကောက်ပြဲအတကြ် ၂၀၁၀ ခိုံစ်ြမြာ ကဵင်းပမယ်ဆ္ဘိုပီးတော့ေုကညာခဵက်ထုတ် လာတယ်။ အဲဒီလိုထုတ်လာတဲ့အတကြ် ကဵနော်တိုႛဟာ ဒီတာဝန်ကိုမကေဵဏ္ဍပန်ြတဲ့အစိုးရကို တရားစြဲဆိုခငြ့် ကဵနော် တိုႛ ရရြိလာတယ်။ ဒၝေုကာင့် ကဵနော်တိုႛ သီူးခားသက်သာခငြ့် ဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ အရူပည်သူႛလတ်ြတော်ခေၞယူကဵင်းပ ပေးဖိုႛဆိုတဲ့ အမိန်ႛဒီဂရီ ခဵပေးဖိုႛ ကဵနော်တိုႛိုံင်ငံတော်တရားရုံးခဵပ်ြမြာ ကနေႛ တရားစြဲဆိုလြာ သြားတင်ပၝတယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ အဲဒီတော့ရော စြဲဆိုလိုႛရခဲ့လားခင်ဗဵ။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ သြားတဲ့အခၝမြာ တရားမှူာန လက်ထောက်င်္ီနြ်ုကားရေးမြးဆီမြာ ကဵနော်ကို ဒၝကိုတင်တယ်။ သူက ကဵနော်တိုႛကို ခေတ္ဇစောင့်ခိုင်း္ဘပီးတော့ ထက်ြသြားတယ်။ အဲ အထက်လူဋ္ဌကီးကို မေးမယ့်သဘောပေၝ့လေ၊ တနာရီခြဲလောက်ုကာတော့မြူပန်ရောက်လ္ဘာပီးတော့ ကဵနော်တိုႛအဆိုလြာကို လက်မခံဘူးဆ္ဘိုပီးတောူ့ငင်းပယ် ခဲ့ပၝတယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ အဲလို အဆိုလြာကို လက်မခံဘူးဆိုလိုႛရြိရင် ဒီမြာပဲ လမ်းဆုံး္ဘပီလားခင်ဗဵ။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ အူမင့်ဆုံးရုံးကို ကဵနော်တိုႛသြားတာမိုႛလိုႛ နောက်ထပ်တင်စရာတော့ မရြိပၝဘူး။ ဘီဘီစီ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ အစိုးရကို တရားစြဲဖိုႛဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမြ မရခဲ့တဲ့အေူခအနေဆိုတော့ အခုကဵ တော့မြ NLD က ဘာူဖစ်လိုႛတရားစြဲဖိုႛ ဋ္ဌကြိးစားရတာလဲခင်ဗဵ။ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ အဓိက ဋ္ဌကြိးစားရတဲ့အခဵက်က NLD ဟာ ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာခဵင်တယ်။ ဥပဒေထဲက အခငြ့်အရေးတေကြို ကဵနော်တိုႛတောင်းမယ်။ မပေးခဵင်ဘူး၊ မပေးတတ်ဘူးဆ္ဘိုပီးတော့တော့ ကဵနော်တိုႛကြေိာံင့်ြေိံး နေမြာမဟုတ်ဘူး။ ဒၝက မပေးတဲ့သူရဲႛတာဝန်ပဲူဖစ်မယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ ဒီနောက်ထပ်ရြေးကောက်ပြဲတခုလုပ်မယ်ဆိုတာကို ၂၀၀၃ ခိုံစ်ြလောက်ကတည်းက လမ်းစဉ် ၇ ခဵက် ဆ္ဘိုပီးတော့ ခဵမတ်ြခဲ့တာပေၝ့လေ။ အဲ့တော့ အဲဒီတုန်းကကတည်းက ဘာလိုႛတရားမစြဲခဲ့တာလဲ ခင်ဗဵ။ အခုကဵမြ တရားစြဲဆိုဖိုႛ ဘာလိုႛစဉ်းစားတာပၝလဲ။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ အဲဒီတုန်းက ဆောင်ရက်ြခဲ့တာတေနြဲႛပတ်သက်လိုႛရြိရင် အဲဒၝတေဟြာ ဥပဒေ သဘောမဆောင် ပၝဘူး။ ကဵနော်တိုႛ အုပ်ခဵပ်ြရေးအာဏာရဲႛ ဘောင်အတငြ်းကေူပာဆိုနေတာပဲူဖစ်တယ်။ ဥပဒေနဲႛအညီေူပာတာက အခု အမိန်ႛတေကြ ဥပဒေနဲႛအညီထုတ်ခဲ့တဲ့ အမိန်ႛတြေူဖစ်တဲ့အတကြ် ဒီအမိန်ႛတေအြရ တရားစြဲဆိုခငြ့်က အခုအခဵိန်မြ ရတယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛဒီလိုမတ်ြယူပၝတယ်။ ဘီဘီစီ ။ ။ အဲတော့ ဒီ အမိန်ႛတေအြရ သူတိုႛဆက်လုပ်သြားမယ့်လုပ်ငန်းတေနြဲႛပတ်သက်လိုႛရော NLD ဘက်က ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ။ ဥပမာ ဒီရြေးကောက်ပြဲအသစ်ထပ်လုပ်မယ်။ ဆိံ္ဋခံယူပြဲထပ်လုပ်မယ် ဆိုတာနဲႛ။ ဦးဉာဏ်ဝင်း ။ ။ NLD ရဲႛ သဘောထားအဓိကေူပာလိုႛရြိရင်တော့ ရေးဆြ္ဘဲပီးသြား္ဘပီဆိုတဲ့ ဖြဲႛစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေ မူုကမ်း Draft Constitution ဟာ တရားဝင်မမြရြိဘူးလိုႛ ကဵနော်တိုႛလက်ခံတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လူႛအခငြ့်အရေးတေကြို ဖော်ဆောင်ိုံင်ဖိုႛ မူဖစ်ိုံင်ဘူးလိုႛ ကဵနော်တိုႛလက်ခံတယ်။ ဒီဟာတေရြဲႛ အဆက်အနေနဲႛပဲ သဘောထားတယ်။ူပည်လုံးကဋ္ဋတ်ဆိံ္ဋခံယူပြဲူဖစ်ူဖစ်၊ နောက် လတ်ြတော်ပဲူဖစ်ူဖစ် တရားမ၀င်တဲ့ အေူခခံဥပဒေတေအြပေၞမြာ သြားတာ တေခြဵည်းပဲလိုႛ ကဵနော်တိုႛူမင်ပၝတယ်။ NLDူပန်ုကားရေးအဖြဲႛ၀င် ဦးဉာဏ်ဝင်း က NLD က အစိုးရကို တရားစြဲဖိုႛဋ္ဌကြိးစားခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တေအြေုကာင်းေူပာူပသြားခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်
Reactions: ဖိုးသံ (လူထု) - လာန္ဘေပီ
လာန္ဘေပီဖိုးသံ (လူထု)ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ အရယ်ရပ်အငိုရပ်အေူပာရပ်အစားရပ်မ္တွော်သူမ္တွော်၊ စငြ့်သူစငြ့်ကိုယ့်အသက်ရြူသံ၊ ကိုယ်ူပန်ုကားရတဲ့္ဘငိမ်သက်မဋ္ဌြကီးအုကားသူတခနြ်း၊ ကိုယ်တခနြ်းတိုး-တိုး၊ တိုး-တိုးမေးထိုးကာ၊ ခေၝင်း္ဘငိတ်ကာ"လာန္ဘေပီ၊ လာန္ဘေပီ" တဲ့။ သူတိုႛုကည့်တယ်မူမင်ရဒၝပေမဲ့သိတယ်။သူတိုႛနားထောင်တယ်မုကားရဒၝပေမဲ့သိတယ်။ ခြေးမဟောင်၊ေုကာင်မလန်ႛုကက်မတနြ်၊ ကဵီးမသာဒၝပေမဲ့၊ မလြဲဘူးဒိုႛသိတယ်၊ မယငြ်းဘူးဒီေူခသံမဵြိး၊ ဒိုႛုကားဖူးတယ်ဒီရေကြးေုက်ာသံမဵြိး၊ ဒိုႛအော်ခဲ့ဖူးသပေၝ့သဲ့သဲ့လား၊ တိုးတိုးလားဒိုႛနားမမြားဘူး။ရြာဦးကစေတီယံ၊ ဆြဲလြဲတေတြ၀ဲဝဲနဲႛညောင်ရက်ြတြေ တရြဲရြဲူမည်နေမတြော့အနာဂၝတ်ကိုသယ်လာတဲ့မုန်တိုင်းနီဋ္ဌကီး လာန္ဘေပီပေၝ့ဒီကိုမရောက်သေးလိုႛသာရယ်။ လက်တြဲဖိုႛအတကြ်၊ လက်ကုပ်ေူပာပၝေူခလမြ်ူးပင်ဖိုႛအတကြ်၊ေူခတိုႛေူပာပၝမဵက်စိလ္တွင်ဖိုႛ၊ မဵက်စပစ်ူပပၝလာတဲ့အခၝသူတိုႛလည်း ပၝလာမယ်ခပ်ြဒေၝင်းနဖူးစည်းရြ္ဘာပီူးပင်ထားပၝပိုစတာကားခဵပ်ရေးဖိုႛူပင်ထားပၝဂဵင်ဂလိကိုလည်း္ဘမိနေအောင်သြေးထားပၝမပူပၝနဲႛ နေထက်ြခဵိန်မြာ နေထက်ြနေတက်ခဵိန်မြာ နေတက်နေကဵခဵိန်မြာ နေကဵနေ၀င်ခဵိန်မြာ နေ၀င်နောက်္ဘပီး သန်းကောင်သန်းကောင့်ဟိုဘက်မြာသမိုင်းသစ်ဒိုႛလက်နဲႛထုဆစ်မယ်။
မိုးမခ အင်တာနက်လငြ့်တင်ရင်း မောင်ရစ် ရူးသြာူးခင်း
မိုးမခ အင်တာနက်လငြ့်တင်ရင်း မောင်ရစ် ရူးသြာူးခင်းမောင်ရစ်ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ရန်ကုန်ူမြိႚုကီး တခုလုံး မီးခိုးတြေ အူနေခဵိန်မြာ သတိူပန်ဝင်လာူခင်ူးဖစ်သည်။ လက်ထဲမြာူမဲူမဲဆုပ်ကိုင်ထားသည့် ကလောင်၊ ကင်မရိာံငြ့် အသံဖမ်းစက်တိုႚက တစစီ လငြ့်စင်သြာူးခင်း မရြိသေးပေ။ ဘေးမြာက ကိုယ့်ဝိုင်းတော်သားတြေ ကဵန်နေသေးသည်။ သေနတ်သံမဵား၊ ဗုံးသံမဵားက အဝေးတနေရာဆီမြုကြိုးကာုးကြိုးကာုးကားနေရသည်။ လူထုကီးက မောင်ရစ်တိုႚ ၀ပ်နေသော လမ်းဘေးကနေေုကြးေုက်ာသံမဵာိးံငြ့် ခဵီတက်သြာုးကသည်။ သူတိုႚလက်ထဲမြာက ဒေၝင်းအလံတြေ၊ မီးတုတ်တြေ၊ လက်လုပ် ဒုတ်တြေ၊ ဓၝးတြေိံငြ့်ူဖစ်သည်။ "ကဵနော်တိုႚ သူတိုႚနဲႚပဲ လိုက်ူပီး သတင်းယူရမလြား …" အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းက မေးသည်။ မောင်ရစ်က ကယောင်ကတန်ိးံငြ့် ခေၝင်ူးငိမ့်ူပသည်။ စကားဆုံးသည်ိံငြ့် သူတိုႚ လူအုပ်နောက်သိုႚေူပးလိုက်ရတော့သည်။ူပည်ပက သယ်ယူလာသည့် ဖုန်းတေကြ အလုပ်လုပ်နေသူဖင့် အဖြဲႚတေကြ တယောက်နဲႚတယောက် သတင်းလမြ်းပေး၊ လမြ်းပိုႚိုံင်ူခင်ူးဖစ်သည်။ ခဵီတက်နေသည့် လူထုကီးကလည်း သူတိုႚတြေ လိုက်လာတာကို သဘောကဵသည်။ သူတိုႚကလည်း သတင်းမေးလိုႚရတာကိုး။ "ရေဂြုံတိုင်မြာ ဘယ်လိုတဲ့လဲ။ " လူငယ်တယောက်က မေးသည်။ လက်ထဲမြာက စစ်တပ်လား လုံထိမ်းဆီကလားမသိ၊ လုလာပုံရသော ဒိုင်းကာတခုကို ကိုင်ထားသည်။ ဒိုင်းကာထိပ်မြာက စက်သေနတ်ကဵည်ဆံဖောက်ရာမဵားကို တြေႚရသည်။ "ဘုန်ုးကီးတေအြမဵာုးကီးက အဖြဲႚခဵပ်ြရုံးကို ၀ိုင်ူးပီး ကာကယ်ြထားတယ်။ လူတေကြော လူငယ်တေကြောက ရေတြိဂုံဘုရားကို တက်သိမ်းထာူးပီူးပီ။ အဲဒီမြာ သပိတ်မြောက်တဲ့ လူတြေ စုထာုးကလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်က ကန်တော်ုကီးဖက်ကနေ ၀င်စီးဖိုႚလုပ်လိုႚ အဲဒီက အိမ်တေကြော၊ ဆိုင်တေကြောကို တပ်ဦးတခုက မီးတင်ရြိႚပစ်လိုက်တယ်။ အခု စစ်တပ်က မီးလောင်ူပင်နောက်မြာ ရောက်နေတယ် …" မိုးမခ(ရန်ကုန်)အဖြဲႚထဲက မောင်ရစ်နဲႚခုမြူမင်ဖူးသည့် အထောက်တော်တယောက်က ရငြ်ူးပနေသည်။ လမြ်းမေးလိုက်မိသည်။ "အဲဒီမြာ ဘယ်အဖြဲႚက သတင်းလိုက်ယူနေသလဲ …" "ဘန်ကောက် ဒီဗီဘီက တအုပ်စု အဲဒီမြာ လိုက်ပၝနေတယ်…" သူက မောင်ရစ်ကို လမြ်းေူဖလိုက်သည်။ "ကဵနော်နဲႚ ဖုန်းခဵင်းလည်း ခဵိတ်ထာူးပီးသား။ ထူးရင်ေူပာမြာပၝ။" လူအုပ်ုကီးက ရန်ကုန် ဆေးရုံကီးကို ခဵီတက်နေူခင်ူးဖစ်သည်။ူမန်မာ့အသံကိုတော့ သပိတ်မြောက်တပ်ဦးတခုက ပိတ်ဆိုႚထားသည်။ စစ်တပ်က တက္ကသိုလ်မဵားအားလုံးကို ဗုံးမဵား၊ စိန်ေူပာင်းမဵာိးံငြ့်ပစ်ူပီူးဖိခြဲထားသူဖင့် ကမာရတြ်ူမြိႚနယ်၏ ရင်ဘတ်ုကီးတခုလုံး ပငြ့်ူပီး ပေၝက်ကဵနေသလိုဖစ်နေသည်။လူတေကြတော့ လမ်းတေအြားလုံးကို သစ်ပင်တြေ၊ ကားတေနြဲႚ ပ်ိတ်ူပီး မီးတင်ရြိႚထားသည်။ ရပ်ကက်ြတေထြဲကို စစ်သားတေကြ တင့်ကားတြေိံငြ့်ုကိတ်ူဖတ်ူပီး ထိုးဖောက် မောင်ိးံငြ်ုကသော်လည်း လူတေကြ ပိတ်ဆိုႚူပီး အနီးကပ် မီးရြိႚဖဵက်ဆီးနေုကသူဖင့် ရပ်ြထြေးမကြေုကာက်စရာကောင်းသည်။ အဲဒီဖက်ကိုတော့ ထိုင်းနယ်စပ်က သတင်းအဖြဲႚတေကြ လိုက်နေသည်။ ဧရာဝတီအဖြဲႛက အဲဒီမြာ ရြိနေသည်ဟုကားသည်။ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်နေအိမ်အထိကို လူထုက ဘုန်ုးကီးတြေိံငြ့် ခဵီတက်ူခင်ူးဖစ်သည်။ သံတမန်အိမ်ရာရပ်ကက်ြတေမြာ စစ်တပ်က ပိတ်ဆိုႚထားသူဖင့် သံရုံးမဵားက ကားမဵားကို အကာအကယ်ြယူပီး တပ်ဦးတခုက ဒေၞစုခံထဲကို အရောက် သြာိးိုံင်သည်။ အဲဒီမြာ မင်္ဇဵိမနဲႚ ဟစ်တိုင်အဖြဲႚက လိုက်ပၝသြားသူဖင့် ဒေၞစု၏ အရေးပေၞမိန်ႚခနြ်းကို သူတိုႚ အင်တာနက်ပေၞ အူမန်တင်လတ်ြလိုက်ိုံင်သည်။ိုံင်ငံတကာသတင်းဌာနတေကြ သူတိုႚ ခဵယ်နယ်တေမြာ အင်တာနက်က တင်သမ္တွကို အူမန်ယူပီူးပန်လတ်ြနေသူဖင့် ကမ္တာုကီးကတော့ ရင်မူပီူးမန်မာူပည်ကိုကည့်နေမည် ထင်သည်။ "ူမန်မာ့အသံမရလည်း အရေးမုကီးဖူး။ အတိုက်အခံသတင်းဌာနကလူတြေူပည်တငြ်းက သပိတ်တပ်ဦးတေနြဲႚအတူရြိရင်ူပီးတာပဲ …" တယောက်က လမြ်းေူပာသည်။ ဟုတ်တာပဲ။ သတင်းတေကြို ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေနဲႚ အာရ်အက်အေူမန်မာအစီအစဉ်က မိတ်ဆေတြေကြတဆင့် သတင်းအတည်ူပခြဵက်ယူပီး လငြ့်နေလဵင် တတိုင်ူးပည်လုံးကူပည်သူတြေ သတင်းမူပတ်တော့ပေ။ ဆူးလေမြာတော့ စာနယ်ဇင်းသပိတ်တပ်ဦးက နေရာယူထားသည်ဟုကားသည်။ စစ်တပ်က တိုက်တေကြို မီးတင်ရြိႚပစ်လိုက်သူဖင့် လမ်းပေၞကို လူတြေ အကုန်ရောက်လာသည်။ သူတိုႚမ္တွော်လင့်သလို လူတေကြ ကစဉ့်ကလဵာူးဖစ်သြားမယ့်အစား လူတေကြလည်း မီးတောထဲက တိုးထကြ်ူပီး စစ်တပ်ကိုပန်ူပီး တောနင်းသလိုပန်နင်းလာသည်။ နေစရာ အိမ်တြေ၊ စားစရာ လုပ်ငန်းတြေ မရြိမြာတောူ့ပတ်ူပတ်သားသားပဲူပန်ခုခူံပီး ရန်ကုန်ူမြိႚႛတငြ်းကို လူထုကူပန်သိမ်းတာူဖစ်သည်။ ဆေးရုံကီးမြာတော့ ဆရာဝန်တြေ၊ သူနာူပတြေတြင်သာမက လုပ်အားပေး ကေဵုာင်းသူ ကေဵာင်းသားတေပြၝ တြေႚနေရသည်။ ဘယ်ကတည်းက ရောက်နေမနြ်း မသိသော အယ်လ်ဂဵာဇီးရားက တီဗီကင်မရာတေနြဲႚ သတင်းထုတ်ူပန်ပေးနေတာကို တြေႚရသည်။ သူတိုႚကလည်ူးဂိလ်ြတု ဆက်သယ်ြရေးစက်ကို ပေးသုံးမည်။ သတင်းတြေ၊ အသံတြေ အရုပ်တေလြည်း ကောင်းတာလေးတြေ မ္တွပေးရန်ေူပာသူဖင့် မိုးမခအဖြဲႚသားတြေ အုကိကြ်ူဖစ်သြားသည်။ အင်တာနက်ပေၞ တင်စရာတြေ အူမန်တင်ရသည်။ အသံတေနြဲႚ အရုပ်တေကြ အဓိကူဖစ်နေသူဖင့် စာရိုက်ရန် မစီစဉ်ိံ်ိုင်တော့ပေ။ "တိုင်ူးပည်ုကီး ပဵက်ူပီလား။ူပည်တငြ်းစစ်ုကီးနဲႚ တစစီူပိကြဲူပီလား ”ိုံင်ငူံခားသတင်းထောက်က မေးလာသည်။ မိုးမခ(ရန်ကုန်)ကတော့ ခပ်တင်းတင်းေူဖသည်။ "အခုပည်သူတေဆြီမြာ ဦးဆောင်မပြေးနေတဲ့ အတိုက်အခံပၝတီရြိတယ်။ ခေၝင်းဆောင်တြေ ရြိတယ်။ သူတိုႚတေကြူပသနာတေကြို ရြေႚကနေေူဖုကားပေးနေတယ်။ူပည်သူလူထုက ခုခဵိန်မြာ စစ်တပ်လက်ထဲက တိုင်ူးပည်ကိုပန်သိမ်းနေတာ။" "ိုံင်ငံတကာကို ဘာေူပာထာူးပီူးပီလဲ" "ိုံင်ငံတကာက အခဵိန်မီဝင်ူပီူးပည်သူတေဖြက်က ရပ်တည်ပေးမြူဖစ်မယ်။ အတိုက်အခံကလည်း တောင်းဆိုထာူးပီူးပီ။ ဒၝဆိုရင် စစ်တပ်တေကြူမြိႚတြေ ရြာတြေ လူတြေုကားထဲက ဆုတ်ပေးရင် လူထုကလည်း အသေခူံပီူးပန်တိုက်နေမြာ မဟုတ်ဘူး။" မောင်ရစ်တိုႚအဖြဲႛက ဆေးရုံကီး အရေးပေၞနားမြာ နေရာယူထားလိုက်သည်။ ရန်ကုန်အြိံႚက ဒဏ်ရာရ၊ သေေုကသမ္တွကို ဒီနေရာမြာ တြေႚႛရသည်။ သတင်းလည်း ပိုႚလိုႚရမည်။ ကောင်းကင်တခုလုံးကတော့ မီးခိုးတေနြဲႚ မြောင်မဲနေသည်။ ဘယ်ုကည့်ုကည့် မီးခိုးလုံးမဵား၊ လူထု၏ အော်ဟစ်သံမဵား။ သေနတ်သံတေကြလည်ုးကားနေရဆဲ။ သေနတ်သံတခဵက် တခဵက်ကို လူထုကီး၏ တခဲနက်ဟစ်ေုကြး ညာသံပေးသုံကီးက ဖုံးလမြ်းသြားသည်။ူပီးလဵင် အဲဒီနေရာက သေနတ်သံ ပေဵာက်သြာူးပီ။ "အိမ်ူပန်စရာ မရြိတဲ့လူတြေ၊ မိသားစုတေကြို ဘယ်ပိုႚရမြာလဲ။" တပ်ဦးတခုကို ဦးဆောင်လာသူ လူငယ်လေးက မေးနေသည်။ သူညာဖက်လက်မောင်းမြ ပတ်တီးတေစြီးထာူးပီး သြေးတေကြ စီးကဵနေဆဲူဖစ်သည်။ "ဆူးလေးဘုရားမြာ စုမယ်။ူမြိႚထဲက ဟော်တယ်တြေ၊ ရုံးခန်းမတေအြကုန်လုံး ဖငြ့်ူပီးတော့ သူတိုႚတေကြို လက်ခံထာုးကလိမ့်မယ်။ သာရေး နာရေး ကူညီမအြသင်းတေကြ အတြေႚအုကြံရြိတဲ့ ခေၝင်းဆောင်တေကြ စာနယ်ဇင်း သမဂ္ဂက လူတေနြဲႚ ပေၝင်ူးပီးေုကူငာခဵက်ထုတ်ထားတယ်။"ူပည်ပသုံး ဖုန်းတလုံးကိုင်ထားသူ အဖြဲႚတခုက လမြ်းအော်ေူပာလိုက်တာုကားလိုက်ရသည်။ သူတိုႚက မောင်ရစ်တိုႚကို လမြ်းလက်ူပသူဖင့်ူပန်လက်ူပလိုက်ရ၏။ "ဘယ်ကလဲဗဵ။" အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းက မေးသည်။ ရန်လိုကဋ္ဋဲက … "ူပည်တငြ်း ဂဵာနယ်တိုက်တခုကပဲ။ သူတိုႚလည်း သတင်းကူလိုက်ပေးနေတယ်။ အဲဒၝကို နယ်စပ်က ရိုးမ ၃ တိုႚ၊ ခေတ်ူပိင်ြတိုႚက သူတိုႚဆီက ပင်္စည်းတြေ ၀ိုင်းကူပေးထားတယ်။ ကဵနော်တိုႚတေဆြီက ပိုရင် အသံဖမ်းစက်တြေ ပေးထားခဲ့။ ကန်ြပဵတြာတြေ မ္တွထားခဲ့လိုႚရတယ်။ သူတိုႚတေကြ နယ်ပိုကဋ္ဋမ်းတယ်ဗဵ။ လူလည်း ပိုသိတယ်။ ကဵနော်တိုႚက သူတိုႚနောက်က သတင်းလိုက်ရမြာ။" "ကဲ လိုက်ဗဵာ။ " မောင်ရစ်က ၀င်ေူဖလိုက်မိသည်။ "နယ်စပ်တေကြ ဘယ်လိုလဲ" သူတိုႚကို မေးလိုက်မိသည်။ သူတိုႚက အဖော်ရူပီူဖစ်၍ ၀မ်းသာနေသည်။ ထမင်းထုတ်တေလြည်း ဝေပေးသည်။ "နယ်စပ်တေမြာ တူခားတိုင်ူးပည်တေကြ သူတိုႚစစ်တပ်တေနြဲႚ လာစောင့်နေတယ်။ူဖတ်ေူပးလာသူတေကြို လက်နက်သိမ်း၊ မတ်ြပုံတင်လုပ်ူပီး စခမ်းတေထြဲမြာ ထိမ်းထားတယ်။ေူပးတာကူပည်သူမဟုတ်ဘူး။ စစ်သားတေနြဲႚ သူတိ်ုႚမိသားစုတြေ။ တနလာဿရီတိုင်းကိုတော့ ထိုင်းနယ်စပ်ဖက်က အဖြဲႚတြေ အကုန်လုံး ၀င်လာုကူပီ။ ရုံးခန်းဖငြ့်တာတြေ၊ စုရပ်တြေ လုပ်နေုကတယ်။ သူတိုႚတေလြည်း ၀ိုင်းကူညီဖိုႚ ခဵီတက်လာမယ်ေူပာတယ်။ အဓိကက ဒီကပၝတီရဲႛ သဘောပဲ။ ပၝတီက နယ်တေမြာ အရေးပေၞ အုပ်ခဵပ်ြရေးအဖြဲႚတြေ ဖြဲႚဖိုႚေူပာရင် လိုက်ဖြဲႚမယ်တဲ့။ ရပ်ကက်ြက လူုကီးတေနြဲႚပဲ ၀ိုင်းလုပ်ုကမယ်တဲ့။ တပ်တေထြဲအထိတော့ လိုက်ူပီး စီးနင်းတာ မလုပ်သေးဖူး။ူမြိႚတြေ နယ်တေထြဲမြာူပည်သူကြိုိံမ်ိံငြ်းတာ သတ်ူဖတ်တာ မလုပ်ရင်ူပီးတာပဲတဲ့။" လူငယ်လေးကူပန်ေူဖသည်။ "တောေုကာင်တေကြော ရြိသလားဗဵာ။ အင်းစိန်ထောင်ကော ဘယ်လိုလဲ။ " "မီးတြေ လောင်လာတာနဲႚ အင်းစိန်ထောင်ကို ဖငြ့်ခဵရတာပဲလေ။ ၈၈ အဖြဲႚတေကြ စည်းကမ်းတကဵ လူတေစြုပီး ခဵီတက်လာလိုႚ လူထုကီး တခုလုံးက မီးတေလြောင်နေတဲု့ကားက ၀ိုင်ူးပီး ပူးပေၝင်း ခဵီတက်ုကတာ။ စစ်တပ်က ဒၝကို ပစ်လိုႚ ဒီကောင်တေကြို လူထုကူပန်ူပီး ခုခုံကရတာပဲ။ ကဵနော်တိုႚမြာ အဲဒီူဖစ်စဉ်တခုလုံး အရုပ်ရိုက်ထားတာ ရြိတယ်။ " မောင်ရစ်တိုႚ မဵက်ြိာံမဵား ၀င်းသြာုးကသည်။ ဒီအရုပ်တေကြို ကမ္တာုကီးကော၊ူမန်မာူပည်သူတေကြောုကည့်လိုက်ရရင် ဘယ်လောက် ၀မ်းသာလိုက်မလဲ။ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းက တနေရာကို လက်ညြိးညနြ်ူပသည်။ သူရဲႚ အငယ်ဆုံးညီမလေး။ ခေၝင်းမြာ နဖူးစီး အနီနဲႚ တပ်ဦးတခုနဲႚအတူ လူနာတေကြို သယ်ဆောင်ူပီး ဆေးရုံကီးထဲ ၀င်လာနေသည်။ သူနဲႚ သူညီမလေးတိုႚ မတြေႚုကတော့တိာံစ်ြပေၝင်း မဵားစြာ ရြိူပီ။ သူ နယ်စပ်ကို ထကြ်ေူပးတိမ်းရြောင်ကတည်းကပေၝ့။ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်းက အဝေးကပဲုကည့်ူပီး ကေဵကေဵနပ်နပ်ုကီူးပြံးလိုႚ နေလေသည်။ ၀ုန်းကနဲူမည်ဟီးသုံကီးက အနီးကပ်ူပီး ပေၝက်ကြဲသြားသည်။ မောင်ရစ်တိုႚ တစစီ လငြ့်စင်ူပိကြဲကုန်ုကတော့သည်။ မောင်ရစ် သတိူပန်လည်လာခဵိန်မြာတော့ ဆန်ဖရန်ူမြိႚက စိတ္ဇဇ ဆေးရုံပေၞမြာူဖစ်သည်။ ဦးြေိာံက်ိံငြ့် အာရုံေုကာဆေးရုံဟု ယဉ်ကေဵးအောင်ခေၞ၏။ သမီးကတော့ သူႚအဖေ စိတ်နောက်ူပီး ရူးသြားလိုႚ ငိုနေသည်။ မိန်းမကတော့ နေႚမြာ ထမင်းစားဖိုႚ ကန်ြပဵတြာတိုႚ၊ နက်ဝပ်တိုႚူဖင့် ကူလီထမ်းသည့် အလုပ်ကိုလုပ်၊ ညဖက်မြာတော့ ဇီးကက်ြမဵားလို မအိပ်ဘဲ မိုးမခအင်တာနက် စနြ်ုကီး မိုးပေၞလငြ့်ရင်ူးဖင့် စိတ်ရူးပေၝက်သြားသည့် ယောကဵာ်းအေုကာင်းကို ရငြ်ူးပရလနြ်းသူဖင့် အသံဝင်ူပီး စိတ်တိုနေသည်။ အယ်လ်အေက မီးလဵံေူမခြေးတိုႚ လင်မယားကတော့ သတင်းလာမေးရြာသည်။ မောင်ရစ် ပယောဂတြေ ကပ်နေတာ ပေဵာက်အောင်လိုႚ ဦးဇင်းဉာဏ်ဦးမောင်တိုႚ ဦးဇင်းကိုသက်တိုႚက ပရိတ်ရတ်ြပေးဖိုႚ လာနေသည်တဲ့။ တော်ပၝသေးရဲႚ ဆေး ဦးပေလိုႚ။ ဟဲ ဟဲ။ အဲန်အယ်ဒီနဲႚ ၉၀ ရြေးကောက်ပြဲုကီး ရည်ြပၝစေသော်၊ အသက်။ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပ်ြက တပ်မတော်အေူခခံဥပဒေဆိံ္ဋခံယူပြဲကို လက်မခံေုကာင်းေုကူငာ
အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵပ်ြက တပ်မတော်အေူခခံဥပဒေဆိံ္ဋခံယူပြဲကို လက်မခံေုကာင်းေုကူငာမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အထူးေုကူငာခဵက် ၂/၂၀၀၈ူဖင့် အဲန်အယ်ဒီပၝတီက ထုတ်ူပန်ရာတငြ် ယခု ကဵင်းပမည့် အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲသည် စစ်အစိုးရ၏ ယခင်ကကဵင်းပခဲူ့ပီူးဖစ်သော ၁၉၉၀ ပၝတီစုံရြေးကောက်ပြဲေုကူငာခဵက်မဵား၊ ထုတ်ူပန်ခဵက်မဵားအရ စည်းကမ်ိးံငြ့်မညီညတြ်ူခင်း၊ိုံင်ငံတကာ၏ သဘောထားမဵာိးံငြ့် ဆန်ႚကဵင်နေူခင်းတိုႚေုကာင့် အမဵာူးပည်သူက လက်မခိံိုံင်ေုကာင်း၊ အမဵြိးသာူးပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကို ထိခိုက်ေုကာင်း ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုလိုက်ပၝသည်။ ထိုနေႚမတိုင်မီက ပၝတီ၏ ပုံမနြ်ေုကူငာခဵက်မဵာူးဖစ်သော ၇/၂၀၀၈၊ ၈/၂၀၀၈ တိုႚတငြ် စစ်အစိုးရ၏ အရေးယူမမြဵာူးဖစ်သော ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်အား ရြေးကောက်ပြဲ ၀င်ခငြ့်မပေးသည်ကို ကန်ႚကကြ်ူခင်း၊ လက်နက်အားကိုး အင်အားသုံူးခင်းထက် စေ့စပ်ဆြေးြေိံးရေးကို ထိရောက်ေုကာင်း သဘောထားတိုႚကိုေူပာဆိုနေခဲ့သော်လည်း ယခု အထူုးေုကူငာခဵက်တင်ြမူပတ်ူပတ်သားသားပင် တပ်မတော် အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲကို လက်မခံေုကာင်း၊ ရြေႚနောက် မညီသူဖင့် ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပြဲအတည်ူပြူပီူးဖစ်သည့် အိုံင်ရပၝတီ၏ရပ်တည်ခဵက်မဵားကို အလေဵာႚပေိးိုံင်လိမ့်မည် မဟုတ်ေုကာင်း သဘောထားအေူခခူံဖင့် တုန်ႚူပန်လိုက်သည်ကို တြေႚရပၝသည်။ ထိုရက်မတိုင်မီကူပည်သူႚလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵား ဆိုသည့် အတည်မူပြိုံင်သည့် ပေးစာတငြ် ပၝတီဗဟိုအမဆြောင်အဖြဲႚကူပတ်ူပတ်သားသား ဦးဆောင်မပြေးရန်၊ ယခုအခဵိန်သည် အဆုံးအူဖတ်ကာလကိုရောက်နေသူဖင့်ေ၀၀ၝးမမြဵာုးကန်ႚုကာမမြဵားေုကာင့် အနာဂၝတ်ိုံင်ငံတော်အတကြ် စိုးရိမ်စရာူဖစ်မလာစေရန်၊ူပည်တငြ်းကကောူပည်ပပၝ ၉၀ ရြေးကောက်ပြဲအိုံင်ရပၝတီ၏ ဦးဆောင်မြိံငြ့်အတူ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံရပ်တည်ုကမည်ူဖစ်ပၝ၍ ဦးဆောင်မပြေးပၝရန် စသည်တိုႚ ဖော်ူပထားသည်ကို တြေႚရသည်။ူပည်တငြ်းရြိ ဒီမိုကရေစီရေးအင်အားစုမဵားကလည်း ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပြဲ အိုံင်ရပၝတီတရပ်၏ ဗဟိုအမဆြောင်ကော်မီတီဝင်မဵာိးံငြ့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်တိုႚအားလုံး၏ တခုတည်းသော သဘောထာိးံငြ့် အခဵက်ူပသည့်အပေၞတငြ် အေူခခူံပီး ယခု ၂၀၀၈ မေလကိုဖတ်ကေဵာ်ုကမည်ဟူသော တခဲနက် စူးစိုက်မကြို တြေႛရြိနေသည့် အခဵိန်ူဖစ်သည်။ေုကူငာခဵက်ကို ဒီမြာ ဖတ်ိုံင်ပၝသည်။
Reactions: တရုတ် အိုလံပစ် သပိတ်မြောက်လပ်ြရြားမတြငြ်ူမန်မာ့အရေးလည်း ရြေႚတိုးလာ
တရုတ် အိုလံပစ် သပိတ်မြောက်လပ်ြရြားမတြငြ်ူမန်မာ့အရေးလည်း ရြေႚတိုးလာမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ူပီးခဲ့သည့်လဆန်းမြ စူပီး တရုတ်အိုလံပစ်သပိတ်မြောက်ရေး လပ်ြရြားမမြဵား အရြိန်ူမငြ့်လာုကရာူမန်မာ့အရေးလပ်ြရြားသူမဵားကလည်း တခဲနက်ပၝ၀င်ဆောင်ရက်ြလာုကသည်။ အထူးသူဖင့် စစ်အစိုးရက လာမည့် မေလတငြ် တပ်မတော်အေူခခံဥပဒေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲလုပ်ရန် စိုင်ူးပင်းလာသောအခၝ စစ်အစိုးရ၏ ထာဝရမိတ်ဆြေုကီူးဖစ်သော တရုတ်အစိုးရုကီး၏ေိံရြာသီအိုလံပစ်ပြဲတော်ကို ပစ်မတ်ြထာူးပီး လက်တုန်ႚူပန်သည့် သပိတ်မြောက် လပ်ြရြားမမြဵားကိုပည်ပရောက်ူမန်မာမဵားက အာရုံပိုကဵလာသည်ဟု ဆိုိုံင်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ တငြ် စစ်အစိုးရက သံဃာတော်မဵားကို ပစ်ခတ်စီးနင်းဖမ်းဆီးစဉ်ကူပည်ပက လူႚအခငြ့်အရေးသမားမဵာိးံငြ့်ူပည်ပရောက်ူမန်မာတိုႚ တခဲနက် ပူးပေၝင်ုးကလဵက် တရုတ်သံရုံးမဵားကို ပစ်မတ်ြထား ကန်ႚကက်ြခဲု့ကသည်။ လုံခြံရေးကောင်စီတငြ် တရုတ်က ဗီတို မသုံးရေးအတကြ် တရုတ်အိုလံပစ်ကို မဲ၍ သပိတ်မြောက်မည်ဟုခိန်းေူခာက်ခဲု့ကသည်။ သိုႚနောက်တငြ်ိုံင်ငံတကာအစိုးရမဵားကူမန်မာ့အရေးကို သံတမန်နည်းလမ်းမဵာူးဖင့် ဆောင်ရက်ြလာရာ တရုတ်အိုလံပစ်သပိတ်မြာ အာဖရိက၊ တိဗက်၊ တိုင်ဝမ်ိုံင်ငံရေးမဵား၊ စာနယ်ဇင်း လတ်ြလပ်ခငြ့်မဵာိးံငြ့် ဘာသာရေးလတ်ြလပ်ခငြ့် လပ်ြရြားသူမဵားအတကြ် ဆက်လက် အရြိန်ူမငြ့်တင်ကဵန်ရစ်ခဲူ့ပီူးမန်မာမဵား အရြိန်လေဵာ့သြားသည်ကို တြေႚရသည်။ သိုႚသော်လည်း ဆန်ဖရန်စင်္စကို ဘေးဧရိယာရောက်ူမန်မာအရေး လပ်ြရြားသူမဵားအတက်ြကတော့ တရုတ်အိုလံပစ်မီးရြးတိုင် ဧူပီတငြ် လာရောက်လည်ပတ်မည်ူဖစ်သည့်အတကြ် အူခား လူႚအခငြ့်အရေးလပ်ြရြားသူမဵာိးံငြ့်အတူ လက်တြဲ၍ ဆက်လက် ဆောင်ရက်ြလြံႚဆော်နေရဆဲူဖစ်သည်။ အထူးသူဖင့် တရုတ်ူပည်သည်ူမန်မာစစ်အစိုးရအား ထောက်ခံနေသည့်အတကြ် စီးပြားရေိးိုံင်ငံရေးအရ ပိတ်ဆိုႚအရေးယူရန် ဆန်ဖရန်ူမြိႚတော်က ကန်ႛကက်ြစာထုတ်ူပန်ဖူးသည်ူဖစ်သူဖင့် တရုတ်အိုလံပစ်မီးရြးတိုင်ကို ဆန်ဖရန်က ဧည့်ဝတ်ကေဵမည့်အရေးအတကြ် အမဵာိးံငြ့် ပူးပေၝင်ူးပီး ကန်ႚကက်ြမမြဵာူးပလြုပ်ရေးသည် တောက်လေဵာက်လိုအပ်ခဵက်အူဖစ် ယူဆထားသည်ကို တြေႚနေရသည်။ူမြိႚတော်ဝန်အား လက်မတ်ြထိုး ကန်ႚကက်ြရေး အမအြတကြ် ဘေးဧရိယာရောက်ူမန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီရေးမဟာမိတ်မဵားအသင်း (BADA)၊ူငိမ်းခဵမ်းသော ဗုဒ္ဌဘာသာရေး မိတ်ဆေမြဵား အသင်း (Buddhist Peace Fellowship) တိုႚက အူခားလူမအြဖြဲႚအစည်းတိုႚိံငြ့် ၀ိုင်းဝန်းပူးပေၝင်းဆောင်ရက်ြနေုကရာတငြ်ူမန်မာရဟန်းတော်မဵား၏ သာသနာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚခဵပ်ြကလည်း သဘောခဵင်းမ္တွေုကာင်း ထုတ်ဖော်သည်ကို တြေႚရြိရသည်။ ဖေဖော်ဝၝရီလ ဒုတိယပတ်တင်ြပင်ူမန်မာူပည်တငြ်းရြိ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားလူငယ်မဵားက တရုတ်ူပည်အိုလံပစ်ကို သပိတ်မြောက်ရန် သဘောထား ထုတ်ူပန်လိုက်ရာ တရုတ်ူပည်ကိုယ်တိုင်ကူမန်မာူပည်တငြ်းရေး၊ အာဖရိက ဆူဒန်၊ ဒၝဖိုးပည်တငြ်းရေး၊ တိုင်ဝမ်ိံငြ့် တိဗက်ဒေသူပည်တငြ်းရေးတိုႚိံငြ့် တရုတ်အိုလံပစ် ရတ်ြထြေးမမြဵာူးပလြုပ်မလာုကပၝရန် ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုရသည့် အူဖစ်ကို ရောက်လာသည်။ ထိုအူဖစ်မတိုင်မီကလည်ိးိုံင်ငံတကာက ခေၝင်းဆောင်မဵား၊ နံမည်ကေဵာ်မဵားက တရုတ်အိုလံပစ်ကို တရုတ်ူပည်၏ လူႚအခငြ့်အရေး၊ စီးပြားရေး လတ်ြလပ်ခငြ့် စသည်တိုႚိံငြ် ယဉြ်ူပီး ဝေဖန်လာသည်ကိုတြေႚရူပီူဖစ်သည်။ ယခုလည်း နယူးယောက်ိံငြ့် ၀ၝရင်ြတန်ရြိူမန်မာမိသားစုမဵားက တရုတ်သံရုံးမဵား၊ ကိုယ်စားလယ်ြရုံးမဵားရြေႚတငြ် ကန်ႚကက်ြဆိံ္ဋူပုကသည့်နည်းတူ ၀ၝရင်ြတန်အေူခစိုက်ူမန်မာအရေး အမေရိကန်လပ်ြရြားမအြဖြဲႚ (US Campaign for Burma) ကလည်း အိုလံပစ်သပိတ်အတကြ် အရြိန်ူမငြ့်မတြခုအနေိံငြ့် တရုတ်အိုလံပစ်ရုပ်ူမင်သုံကား အစီအစဉ်မဵားကို ကမ္တာလူဦးရေ ၁ သန်းက မုကည့်ဘဲ သပိတ်မြောက်မည်ူဖစ်ေုကာင်း လက်မတ်ြထိုး လပ်ြရြားမတြခု ဖော်ဆောင်လိုက်ူပန်သည်ကို တြေႚရပၝသည်။ (ကာတနြ်းက ဧရာဝတီ၊ ဟန်လေး လက်ရာူဖစ်ပၝတယ်)
Reactions: မိုးမခ၀င်း - မုတ်ဆိတ်မြေး အရေးတော်ပုံပဇာတ် - ၁
The Ballad Of Hairy Joe - by Sol Panitzမုတ်ဆိတ်မွေး အရေးတော်ပုံ ပြဇာတ် - ၁မိုးမခ ၀င်း (ဘာသာပြန်သည်)ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ Sol Panitz ၏နိဒါန်း ထိုခေတ်က ဂျိူပါးလ်မားသည် နယူးအင်္ဂလန်တွင် လှောင်ပြောင်မူအခံရဆုံး လူတစ်ယောက်အဖြစ် သမုတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သည်။ ၁၈၃၀တွင် ဂျိူးဇက်ပါးလ်မားသည် အရွယ်ရောက်သူ အမျိုးသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ မုတ်ဆိတ်မွေးထားခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အရေး အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၇၂၀ ကတည်းက အမေရိကန်တွင် နှုတ်ခမ်းမွေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးထားခြင်းအလေ့ ခေတ်မစားခဲ့သည်မှာ အဲဒီ ဂျိူတို့ ခေတ်တ်ိုင်အောင် ဖြစ်သည်။ထိုအခါက လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်း လက်မှတ်ထိုးကြသည့် ပန်းချီမှတ်တမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအရ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့်အတူ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မေးစေ့ပြောင်ပြောင်များသာရှိကြောင်း သတိထားမိကြပေမည်။ ဂျိူက သူများနှင့် မတူပါ။ သူက မုတ်ဆိတ်မွေး အရှည်ထားသည်။ ပါးလ်မားက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီး၏အမိန့်ကို ဆန့်ကျင်သည်။ သူ့မိတ်ဆွေများက သူ့ကို ဖယ်ကျဉ်ခဲ့ကြသည်။ စကားတောင် အဖက်လုပ် မပြောကြ တော့ပါ။ ထိုသို့ သူများနှင့်မတူ တမူထူခြား မုတ်ဆိတ်မွေး အရှည်ထားမိသဖြင့်၊ တနှစ်ပတ်လုံး ထောင်နန်းစံခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်တွင်သူ့အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် စာများ ရေးသား၍ သတင်းစာများသို့ ပို့သည်။ သတင်းစာများကလည်း မုတ်ဆိတ်မွေး တဆုပ်ကြောင့် ထောင်လုံးလုံးကျရသည့် အကြောင်းကို သတင်းလုပ်ဖော်ပြကြသည်။ သို့နှင့် ပါးလ်မားသည် လူတဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက် သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူ့မုတ်ဆိတ်တွေ ရှည်လျှားလာသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးသာမက မျက်နှာတွင် မုတ်ဆိတ်မွေး၊ နှုတ်ခမ်းမွေးမထားဘူး၊ မမွေးမြူသူများကို ခေတ်မမီသောသူ မယဉ်ကျေးသောသူအဖြစ် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်လာကြသည်အထိ သူ့အဖြစ်က ရေပန်းစား မှတ်တိုင်တွင်ခဲ့ရသည်။ သူသည် ၁၈၇၆ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး သူ၏ အုတ်ဂူမှတ်တိုင်တွင် သူ၏ ရုပ်တုကို သမိုင်းဝင် မုတ်ဆိတ်မွေးများနှင့် တွဲဖက်ပြီး ထွင်းထုထားခဲ့ပေသည်။ အောက်ခြေမှာတော့ အခုလို ရေးထားပါသည်။ “ ဂျိူးဇက်ပါးလ်မား - မုတ်ဆိတ်မွေးထားလို့ ထောင်ကျခဲ့သူ” … တဲ့ (စာတည်းမှတ်ချက် - ဒီပြဇာတ်ကို မိုးမခမှာ အပတ်စဉ် အခန်းဆက်အဖြစ် တင်ဆက်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ ဆန္ဒခံယူပွဲကြီး မီကောင်းပါရဲ့)ဇာတ်ဆောင်များ ဂျိူ(ခေါ်)ဂျိူးဇက်ပါလ်းမား ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့သား၊ အဓိကဇာတ်ဆောင်ရက်ဘက်ကာ ဂျိူ၏ ဇနီးစလေတာ ဖစ်ခ်ျမြို့မှ စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒါဗီပရီရာ(ဒေးဗစ်) အသက် ၁၁-၁၃နှစ် အရွယ် ဆမ်ပရီရာ၏သားဆမ်ပရီရာ ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့သားတစ်ဦးဘရားသားထရပ်စ် ဖစ်ခ်ျမြို့မှဘုန်းတော်ကြီး အခန်း - ၁ ဂျိူ။ ။ ငါ့လက်တွေမတည်ငြိမ်ပါလား။ဒါပေမယ့်ကြိုးစားပြီးရိတ်ရမှာပေါ့။ အိုး ကိုယ့်လက်ကို ဓါးရှမိပြန်ပြီ။ ဒီတော့ လုပ်စရာတစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ မုတ်ဆိတ်တွေ ရှည်ပေလေ့စေတော့။ ဒါဟာ ပြဿနာရဲ့အစပဲလား။ (သီချင်းသံ၊ ဂီတာသံ ထွက်ပေါ်လာ၊ ထိုဂီတာသံပေါ်လာမှ အစီအစဉ်ကြေညာသူ့အသံ) နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းပြောသူ ။ ။ ဇာတ်လမ်းစပါပြီ။ မက်ဆက်ချူးဆက် ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော် လောက်ကပေါ့... (သီချင်းသ၊ ဂီတာသံ ကျယ်လာ) ဇာတ်ကြောင်း ပြောသူ။ ။ အဲဒီနေ့ကပေါ့။တစုံတရာဖြစ်တော့မယ့် အနံ့အသက်တွေ ထွက်လာပါပြီ.. ( သီချင်းသံ၊ ဂီတာသံ မှိန်သွား.. ) ဇာတ်ကြောင်း ပြောသူ။ ။ ဟိုး...ရှေ့မှာ စိမ်းနီပြာဖြူ ရောင်စုံပြန့်ကျဲနေပါလား.. တောင်ကတုံးတွေလို ရှင်းလင်းပြန့်ပြူးလို့ ပန်းရောင်ချယ် အရိပ်များက မင်းရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာထင်ဟပ်လို့ မြင်ကွင်းနဲ့ရနံ့က အာရုံက လိုက်နိုင်တာထက် ခံစားမူတွေ ပိုနေပြီ။ (သီချင်းသံ၊ ဂီတာသံ အင်ထရိုလေး ပြန်ဝင်လာ..) ရက်ဘက်ကာ။ ။ (နူးညံ့စွာ)... ရှင်က ဘာကို ပြောချင်တာလဲ။ ဂျိူ။ ။ မင်းက အခုတလောကို ငြိမ်နေလိုက်တာ။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ဘယ်သူက ဒါကို လှတယ်လို့ ပြောလိုက်သလဲ။ ဂျိူ။ ။ မသိဘူးလေ။ လယ်သမား ယာသမားဆိုတာ စကားတိုတိုပဲ ပြောတတ်တယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှင်ဟာလေ၊ သူများတခွန်းဆို ရှင်ကဆယ်ခွန်းပြောတတ်တယ်။ ကျမက ဒါကို ` ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု တခါတော့ မတူဘူးရှင့်။ ဂျိူ။ ။အိုး .. ကြည့်ရတာ မင်းစိတ်ထဲမှာ သီချင်းကောင်းကောင်းလေး ရှိပုံရတယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ နာကြင်စရာ သီချင်းပေါ့ရှင်။ ဂျိူ။ ။ မနက်ခင်းရဲ့ပြတင်းပေါက်ကလေးဟာ ရွှေလိုပဲတဲ့။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ရှင်မှန်တာပဲ လုပ်စမ်းပါ။ ဂျိူ။ ။ ငါ့မှာ အခု ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူးဆိုရင် နေ၀င်သွားတာလေးကို ထိုင်ကြည့်နေတော့မယ်ကွယ်။ ကဲ - မကောင်းဘူးလား။ ရက်ဘက်ကာ။ ။အို..ကျမက လူစိမ်းတယောက်နဲ့ နေ၀င်သွားတာကို ကြည့်ရမယ်ပေါ့။ တကယ်လား ရှင်။ ဒါဆို ကျမယောင်္ကျားက ဘယ်လိုထင်မလဲ။ ဂျိူ။ ။ ငါက မင်း ယောင်္ကျား မဟုတ်လားကွဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီ.း.... ရက်ဘက်ကာ။ ။(ခေါင်းမာစွာ) ရှင်က? ကျွန်မယောင်္ကျား ? ဟုတ်လား။ (ရယ်မောလျက်) ရှင်က အယောင်ဆောင်ပဲ။ ရှင်က ဂျိူးဇက်ပါးလ်မား မဟုတ်ဘူး။ ရှင်ကသူနဲ့မတူပေါင်။ အရပ်ကတော့...တူပါရဲ့။ဒါပေမယ့်...... ဂျိူ။ ။သူ့မှာ မျက်လုံးပြာတွေရှိရဲ့လား။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှိတာပေါ့ရှင်။ ဂျိူ။ ။ ငါ့မှာလည်းမျက်လုံးပြာပြာတွေရှိတယ်လေ။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှင့်မှာ ခြေထောက်နှစ်ဘက်ရှိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါနဲ့တော့ ဂျိူးဇက်ပါးလ်မားလို့ မပြောနိုင် ဘူးရှင့်။ ဂျိူ။ ။ ကိုယ်ကမင်းကိုချစ်တယ်လေ။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ဒါကအံ့သြစရာမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်မက လှတယ်လေ။ ကျွန်မယောင်္ကျားကဆို ကျွန်မကို ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးမိန်းမလို့ ပြောတာရှင့်။ ဂျိူ။ ။ သူက အမှန်တရားကို ပြောတတ်သူပဲ။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ဒီမှာရှင့်။ ဒါ နောက်ပြောင်နေတဲ့ စကားတွေလို့ကျွန်မယူဆထားပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မ ယောင်္ကျားသာကြားရင် မလွယ်ဘူး။ ရှင်ပုန်းစရာနေရာသာ ရှာထားပေတော့။ သူက မနာလိုတတ်ဘူးရှင့်။ ဂျိူ။ ။ငါ့ကိုသေချာကြည့်စမ်းပါ။နဲနဲလေးတောင်မမှတ်မိဘူးလား။ ရက်ဘက်ကာ။ ။အင်း....ကျွန်မ စဉ်းစားနေတာက... ဂျိူး။ ။စဉ်းစားပါကွယ်... ရက်ဘက်ကာ။ ။ ကျွန်မနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တူသလိုလို..။ ကျွန်မအကို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ... အင်း...အချက်တစ်ချက်ကလွဲလို့... ဂျိူ။ ။သူက ချောတယ် မဟုတ်လား။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှင့်ရဲ့မုတ်ဆ်ိတ်မွှေးတွေ။ ရှင်သာ တခြားသောယဉ်ကျေးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေလို အဲဒီဟာ ကိုဖယ်လိုက်ရင်တော့...ဒါဆိုရင်တော့... ဂျိူ။ ။ကိုယ် ဒါကို မမေ့ပါဘူး ရက်ဘက်ကာရယ်။ ကိုယ်ကတိ ပေးပါတယ်ကွယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ရှင်က အခုမှ ပြောတယ်။ ဂျိူ။ ။ကိုယ် သိပါတယ်ကွယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် တူသွားပြီ။ ကျွန်မရဲ့ကပ်ကျေးလေးနဲ့သာဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်လဲ ရှင့်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်တဲ့ ဓါးရယ်နဲ့သာဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ သံဒယ်အိုးလေးလို ပြောင်သွားမှာပဲ။ ဂျိူ။ ။ ကိုယ်အခုပဲ ဟောဒီ ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သမားဆီ သွားလိုက်ပါ့မယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်တို့အ်ိမ်မှာ သံတွေလည်း ကုန်နေတော့... ရက်ဘက်ကာ။ ။ရှင့်မျက်နှာကို ကောင်းကောင်း သ ထားနော်။ ဂျိူ။ ။ အခုလည်း ကောင်းနေသားပဲကွယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။ ကျွန်မ ရှင်နဲ့ အတူလိုက်ခဲ့မယ်။ ဂျိူ။ ။ ကိုယ် လမ်းသိပါတယ်။ ရက်ဘက်ကာ။ ။အဲဒါက...(ရယ်လျက်) ရှင်က လူဝိုင်းကြည့်ချင်စရာ ဖြစ်နေပြီရှင့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူ့မှာမှ မုတ်ဆိတ်မရှိဘူးလေ။ ရှင်မုတ်ဆိတ်မရိတ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဂျိူ။ ။နှစ်ပေါင်း တစ် ရာ.... ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှင်က ညာဖို့ ပြင်နေပြီ။ သူတို့က ရှင့်ကို မှတ်တောင်မှတ်မိကြပါ့မလားပဲ။ ဂျိူ။ ။ရက်ဘက်ကာ..မင်းက ဟောဒီကမ္ဘာမှာ ပုံကြီးချဲ့တတ်ဆုံး လူပါပဲကွယ်။ မင်း ဟောဒီမှာ ထိုင်ပြီး ငါ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သမားဆီသွားနေတုန်းလေးစောင့်ရင်း ကလေးတွေထိန်းနေပေါ့။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သမားတော့ ငါနဲ့တွေ့ရမှာ စိတ်လှူပ်ရှားစရာပဲ။ သူ တော်တော်ကို ရိတ်ပေးချင်ရှာမှာ။ ငါပေးမယ့် အဖိုးအခထက်တောင် လုပ်ပေးချင်ရှာမှာ မြင်ယောင်မိသေး။ (သီချင်းသံ၊ဂီတာသံဝင်လာ) သီချင်းဆိုသူ။ ။ ပုံပြင်ဟောင်းပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါကွယ် အမှန်တရားအတွက် သူရပ်တည်ခဲ့တယ် မတူညီမူတွေက သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်သတဲ့ကွယ် သူက ဦးခေါင်းမရွေ့ နောက်မဆုတ်ပါတယ်။ ခုနှစ်ကတော့ ၁၈၃၀ ပါကွယ် ဟောဒီမြို့ထဲကို သူဝင်လာပါတယ် သူ့ကိုညစ်ပတ် ယုတ်ညံ့သူလို့အော်ကြပါသတဲ့ ကလေးတွေကို သူတို့ကအော်ခိုင်းပါသတဲ့။ (သီချင်းသံ၊ဂီတာသံကျယ်လာ) (အသံ၊ လမ်းလျောက်သံ) အခန်း -၂ ဂျိူ။ ။ လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မတွေ့ပါလား။ မာတင်စလေတာရဲ့ စတိုးဆိုင် အရင်ကျော်ရမယ်။ ပြီးရင် နိဗ္ဗာန်ဆိုင်၊ ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့ဘဏ်တိုက်၊ ကေဆီစတုန်းရဲ့ အကျီဆိုင်၊ ပြီးရင်တော့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဆိုင် ပေါ့။ အိမ်အတွက် သံ နည်းနည်းဝယ်ရမယ်။ ရက်ဘက်ကာ့ မီးဖိုချောင်သုံး လက်သုတ်ပ၀ါဝယ်ရမယ် ဆိုတော့............ မာတင်စလေတာ က သူ့ဆိုင်ရှေ့မှာ ထိုင်နေပါလား။ ဒီတော့...နှူတ်ဆက်ဦးမှ။ (အသံ၊ပျောက်သွား) ဂျိူ။ ။မင်္ဂလာပါ မစ္စတာ စလေတာ။ စလေတာ။ ။ အဟမ်း … ဂျိူ။ ။ နေကောင်းရဲ့လား ခင်ဗျ။ (အသံကျယ်ဖြင့်) အား… ခင်ဗျားရဲ့ ဇနီးရော… နေကောင်းရဲ့လား ခင်ဗျ။ စလေတာ။ ။ အဟမ်း … ဂျိူ။ ။ ကျနော်… ကျနော် ၁၀ ပဲနီတန် သံ ၀ယ်ချင်လို့ခင်ဗျ၊ မစ္စတာစလေတာ။ ကျနော့် ခြံစည်းရိုးက ယိုင်နေပြီဆိုတော့ ... သံနှစ်ဆယ်သားလောက်… စလေတာ။ ။ ဘာ သံ မှ မရှိဘူး။ ဂျိူ။ ။ အာ … မနှစ်က ၀ါယာကြိုးတွေဝယ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပေါ့နော်။....(အံ့သြသံ) သံ တချောင်းမှ မရှိတာလား ခင်ဗျ။ စလေတာ။ ။ အားလုံးကုန်ပြီ။ ဂျိူ။ ။ချက်ချင်းကြီး ကုန်သွားသလားခင်ဗျ။ စလေတာ။ ။ ဘာထူးလို့လဲ။ ဂျိူ။ ။ စနေနေ့ကတောင် တွန်စတစ်ကီတစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ကဖြတ်သွားတုန်းက သူ့လှည်းထဲမှာ သံတွေ တပွေ့ကြီး တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်။ သူ ဘယ်က ရသလဲခင်ဗျ။ စလေတာ။ ။ အဲဒါ ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ။ ကျူပ်ဘာသာကျူပ် ဘယ်သူ့ရောင်းရောင်းပေါ့။ ဒါကျူပ်ကိစ္စ။ ဂျိူ။ ။ ဒီမနက် ခင်ဗျား တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခုခုများ လုပ်မိလို့လားဗျာ။ စလေတာ။ ။ အဟမ်း … (အသံ၊ ခြေသံခပ်သုတ်သုတ်) စလေတာ။ ။ (အော်ပြော) ခင်ဗျား ဆိုင်ထဲ ၀င်မလို့လား။ ဂျိူ။ ။ (၀င်သွား) ကျွန်တော် ၀င်ကြည့်မလို့လေ။ ခင်ဗျား သံ ထားတဲ့နေရာများ မေ့နေသလားလို့။ စလေတာ။ ။ ခင်ဗျားအထဲကို တစ်လှမ်းဝင်တာနဲ့ ကျူပ် ရဲ ခေါ်လိုက်မယ်။ (အသံ၊ ခြေသံနောက်ဆုတ်သံ) ဂျိူ။ ။ (စိတ်ဆိုးလာ) မာတင်..ခင်ဗျား ဘာဖြစ်တာလဲဗျာ။ အထဲမှာ သံတွေ အများကြီးပဲ။ စလေတာ။ ။ ခင်ဗျား ကျူပ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတာလား ဂျိူပါးလ်မား။ ဂျိူ။ ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားဆီက ပိုက်ဆံချေးဖူးသလား။ စလေတာ။ ။ အဟမ်း … ဂျိူ။ ။ ချေးဖူးသလား ခင်ဗျာ။ (အသံကျယ်) ခင်ဗျား ပြန်ပြောလေ။ အ နေသလား။ စလေတာ။ ။မ အ ပါဘူး။ ဂျိူ။ ။ ကျွန်တော်က လူဆိုး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်လိုလူကို ဒီလိုဆက်ဆံစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူးဗျာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်ကိုပြောစမ်းပါ..ဘာဖြစ်နေသလဲလို့။ စလေတာ။ ။ (ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာ) ငါ့ကို မထိနဲ့။ ဘုန်းတော်ကြီး ထရပ်စ်က ခင်ဗျားဟာ လူရမ်းကား... ဂျိူ။ ။ ဘုန်းတော်ကြီး ထရပ်စ်က ဟုတ်လား။ ဒါ ဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျ။ စလေတာ။ ။ငါ့နားက သွားစမ်း။ (အော်ဟစ်) ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါဦး.... ဂျိူ။ ။ ခင်ဗျား ရူးနေပြီ စလေတာ။ ဘာလို့ အော်ရတာလဲ။ စလေတာ။ ။ ကျူပ် ခင်ဗျားကို ထောင်ထဲထည့်မယ်။ ဂျိူ။ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို လက်ဖျားနဲ့တောင် မတို့ရပါလား။ စလေတာ။ ။ အရင်တစ်ပတ် ၀တ်ရွတ်ပွဲမှာ သူက ခင်ဗျားကိုယ်ထဲ မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးနေတယ် လို့ပြောတယ်ဗျ။ ဂျိူ။ ။ သူက ကျွန်တော့်အကြောင်းကို ၀တ်ရွတ်တဲ့အထဲ ထည့်ပြောတယ်ဟုတ်လား။ ဘရားသား ထရပ်စ်က ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်မတက်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာ သူက အဲဒီလိုလုပ်တယ်လို့ မစဉ်းစားမိပါဘူးဗျာ။ စလေတာ။ ။ဟောဒီမြို့ကလေးရှိနေသ၍ ခင်ဗျားဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ဘယ်တော့မှမလာရင် ကောင်းမှာပဲ။ ခင်ဗျားကို အလိုမရှိဘူး။ နားလည်လား။ ဂျိူ။ ။ (အသက်ပြင်းပြင်းရူလိုက်ရင်း) ကိုင်း… စလေတာ။ ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် နားမလည်လို့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့၃ပတ်က ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော် နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တယ်။ ခင်င်္ဗျားနဲ့ကျွန်တော် စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့စတိုးဆိုင်ထဲ ချက်စ်တောင် ကစားလိုက်ကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ အချိူ ရည်တစ်ခွက်စီ သောက်ခဲ့ကြတယ်။ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့အတွက်တောင် ပိုက်ဆံမယူခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ စလေတာ။ ။ အဟမ်း … ဂျိူ။ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့တော့ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတောင် အလိုမရှိ တော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာတွေလည်း မရောင်းဘူး။ ဘုရားစာရွတ်ဖတ်တဲ့ထဲလည်း ကျွန်တော့်မကောင်းကြောင်း ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ထောင်ချပစ်မယ်လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်တယ်။ လွန် ခဲ့တဲ့ ၃ပတ်တုန်းက ကျွန်တော်က အခုကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ထပ်မေးမယ် … ခင်ဗျားရော နေကောင်းရဲ့လား ခင်ဗျာ။ စလေတာ။ ။မင်းကိုယ်မင်း ကြည့်စမ်း။ကြည့်စမ်းပါ။ ဂျိူ။ ။ကျွန်တော် ဘာပုံဆိုတာ သိပါတယ်ခင်ဗျာ။ စလေတာ။ ။ခင်ဗျားက ပြဿနာမီးထွန်းရှာတဲ့သူ။ ဂျိူ။ ။ ဘာ ခင်ဗျားကသာ စပြီး မီးမွှေးတာ။ စလေတာ။ ။ ခင်ဗျားရဲ့ မျက်နှာ။ ဂျိူ။ ။ အဲဒါဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်အတိုင်းပါပဲဗျာ။ အဲဒီအတွက် ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ အဲဒါ ချက်ချင်းကြီး အရုပ်ဆိုးသွားစရာ ရှိသလား.. စလေတာ။ ။ ဘုရားကို စော်ကားတဲ့သူ။ ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာမှာ အမွှေးအမျှင်တွေဟာ မကောင်းဆိုးဝါး ၀င်စားနေတာပဲ.. ဂျိူ။ ။ကျွန်တော့်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ? (ယခုမှသဘောပေါက်လာ) ခင်ဗျားဆိုလိုတာက… (အလွန်ရယ်ရသော ဟာသတစ်ခုကို ယခုမှမြင်တွေ့မိပုံ) ခင်ဗျား ဒါ အလေးအနက်တော့ ဟုတ်ပုံမရပါဘူး … (အလွန်ထိမ်းမရစွာရယ်) ပြီးတော့ ဘရားသား ထရပ်စ်... ဂျိူ။ ။ အမလေး...ရက်ဘက်ကာတော့ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး ... (ရယ်လျက်) ငါ့မြင်းတောင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ သူက လူတွေ ဒီလိုပဲဆိုတာ တွေးမိမှာတောင် မဟုတ် … ဒါဗီ။ ။ (အသက် ၁၁-၁၃ နှစ် အရွယ်ကလေး၊ အသံ ၀င်လာ) ဝေး ဟေး ဟေး။ ညစ်ပတ်တဲ့ လူကြီးဟေ့။ ဝေး ဟေး ဟေး … ဂျိူ။ ။(ရယ်မောနေဆဲ) ...ဒါဗီလေးရေ.... ဘယ်နှယ့်လဲကွယ့် ဒါဗီ ပရီရာ… ဒါဗီ။ ။ ဝေး ဟေး ဟေး … ဂျိူ။ ။ လာ … ဒီကိုလာ … ဒါဗီ။ စလေတာ။ ။ မလာနဲ့ ဒါဗီ၊ သူ မင်းကို ရိုက်လိမ့်မယ်။ ဂျိူ။ ။ငါတို့က သူငယ်ချင်းကြီးတွေလေကွယ်။ မဟုတ်လား ဒါဗီရဲ့။ ဒါဗီ။ ။ လူညစ်ပတ်ကြီး လူညစ်ပတ်ကြီး။ ဂျိူ။ ။ (စူးရှစွာ)… မင်းကိုဒီလိုအော်ဖို့ ဘယ်သူခိုင်းတာလဲ။ ဒါဗီ။ ။ကျွန်တော် ဒါပဲသိတယ်။ ကျွန်တော် သီချင်းလေးရတယ်။ စလေတာ။ ။ရဲသွားပြီး ခေါ်ချေ။ မင်းအဖေကို သွားခေါ်ချေ ဒါဗီ။ ဂျိူ။ ။ ခင်ဗျား ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်းပါ မာတင်။ ဒါဗီ သားကို တစ်ယောက်ယောက်က သင်ပေးတာမဟုတ်လား။ ဒါဗီ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တမြို့လုံးက ဆိုနေကြတယ်။ ဂျိူ။ ။ ဆိုပြစမ်းပါဦး။ ဘယ်သူ့အကြောင်းလဲကွဲ့။ ဒါဗီ။ ။ ဦးလေး အကြောင်းပေါ့။ ဂျိူ။ ။ကဲ ဒါဆို ဦးလေးက ကြားသင့်တာပေါ့ကွယ်။ ဒါဗီ။ ။ဟင့်အင်း။ ဂျိူ။ ။ဒါပေမယ့် သားက ရတယ်မဟုတ်လား။ ဆိုပြမှပေါ့။ ဒါဗီ။ ။ သားမဆိုချင်ဘူး။ ဂျိူ။ ။ သားဖေဖေ သင်ပေးတာ မဟုတ်လား။ ဒါဗီ။ ။ဟို … ဟို ... ဂျိူ။ ။ အော် အော်..မင်းသိတောင် မသိဘူးပေါ့။ ဒါဗီ။ ။သိပါတယ် ခင်ဗျ့။ ဂျိူ။ ။ မင်းမဆိုပါဘူးလို့ ငါ့ကို ပြောမယ်ပေါ့။ ဒါဗီ။ ။ ကျွန်တော် သိပါတယ် ခင်ဗျ။ ဂျိူ။ ။ ဒါပေမယ့် ငါ ဘာမှ မသိပါလား။ ဒါဗီ။ ဒါဗီ။ ။အိုး ကျွန်တော့်ကို လွှတ်ပါ။ ဂျိူ။ ။ ဒီ သီချင်းကို မင်းအဖေက သင်ပေးတာမဟုတ်ရင် မင်းဘာသာဆိုတာ ဖြစ်ရမယ်။ ဒါဗီ။ ။အဖိုးကြီးဒန်တာကာ တဲ့ ။ သီချင်းနံမယ်က။ ကဲလွှတ်ပါတော့။ ဂျိူ။ ။ ကဲ … ဆိုပြစမ်း ။ စလေတာ။ ။ ဒါဗီ ရဲကို သွားခေါ်လေ။ ဘာလို့ သွားမခေါ်သေးတာလဲ။ ဂျိူ။ ။ သူ့ကိုဂရုမစိုက်နဲ့ ဒါဗီ။ ကဲ … ဆိုစမ်းပါ။ (”အဖိုးကြီး ဒန်ကာတာ”အမည်ရှိသော သီချင်းညီးသံထွက်ပေါ်လာ) ဒါဗီ။ ။ ရွံ့စရာ လူ့ညစ်ပတ်ကြီး မုတ်ဆိတ်မွှေးထူတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး ဘယ်လိုမှ ရိုသေချင်စရာ မကောင်း ပြဿနာရှာသူရယ် ဟောဒီလို အရုပ်ဆ်ိုးပြီး အကျည်းတန်တဲ့သူ မမြင်ဘူးပေါင်ကွယ် ငါတို့မင်းကိုကြိုးကွင်းမစွပ်ခင် ဒီမြို့က ထွက်သွားပါတော့ကွယ်။ ဂျိူ။ ။ (လက်ခုတ်တီး) အိုး … တော်လိုက်တဲ့ ဒါဗီ။ (ခြောက်ကပ်စွာ) ကလေးကတော့ ဒီသီချင်း ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ရှာဘူး။ ကဲ … ကဲ … နောက်တခါ ဒီထက်ကောင်းကောင်း ဆိဲုနိုင် အောင် သွားလေ့ကျင့်ချေတော့။ မင်းအဖေကို ပြောလိုက်ပါ။ သူကိုယ်တိုင် ငါ့ကိုဆ်ိုပြတာ နားထောင်ချင် လို့ပါ။ မင်းပြောပေးမယ် မဟုတ်လား ဒါဗီ။ ဒါဗီ။ ။ (ထွက်သွား) ကျွန်တော် ပြောပေးမယ်ခင်ဗျ။ ဝေး ဟေး ဟေး … ဂျိူ။ ။ ဒါဗီကလေး ကတော့ ကလေးမို့ ထားပါတော့ဗျာ။ ဒါပေမယ့်ဗျာ ခင်ဗျား … မာတင် ခင်ဗျားကတော့ လူကြီးလူကောင်း မဟုတ်လားဗျာ။ စလေတာ။ ။ ကျူပ် တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးနေပါရစေ။ ဂျိူ။ ။ ခင်ဗျားလည်း ဒီသီချင်းကို သိနေတာပဲ။ ကဲ … ခင်ဗျားက ကျူပ်ကို သီချင်းလေး ညည်း ပြစမ်းပါဦး။ (နောက်ခံအသံ၊ ဒါဗီ၏ သီချင်းညည်းသံက နောက်ခံတွင် ပေါ်လာနေ) စလေတာ။ ။ ကျူပ်စတိုးဆိုင်ထဲ သွားတော့မယ် ဂျိူ။ ။ခင်ဗျား ဒီမှာ နေဦး။ စလေတာ။ ။ ခင်ဗျား ကျူပ်ကို ထိမယ်ပေါ့။ ကျူပ်မှာ သက်သေ ဒါဗီပရီရာ ရှိတယ်။ ဒါ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားမူပဲ။ ခင်ဗျား ပေးဆပ်ရမယ်။ ဂျိူ။ ။ ဆိုလေ ဆ်ိုစမ်းပါ။ မာတင် ကျယ်ကျယ်ဆို။ စလေတာ။ ။ကျူပ် ကျူပ် ဘယ်လို ဆိုရမှန်း မသိဘူးဗျ။ ဂျိူ။ ။ဒါဆို ကျွန်တော် သင်ပေးမယ်။ ခင်ဗျား ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အတိုင်း လိုက်ဆ်ိုလေ။ (ထိုအချိန်တွင် မြို့၏ ဘုန်းတော်ကြီး ဘရာသား ထရပ်စ် ဇာတ်ခုံထောင့်မှ ၀င်ရောက်လာ) ထရပ်စ်။ ။ (ထွက်လာ) ဟိတ် .. ခင်ဗျားတို့... ဒေးဗစ်...ဘာတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတာလဲ။ (ရှေ့အပတ် ဆက်ဖတ်ပါ)
Reactions: သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံကူပည်သူႚဆိံ္ဋခံယူတော့မည်
သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံကူပည်သူႚဆိံ္ဋခံယူတော့မည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဖေဖော်ဝၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အယင်တော့ ဂဵပန်ူပည်က ဂေၞဇီလာ ကမ္တာပတ်ပၝတယ်။ ပၝးစပ်က မီးတြေ မတ်ြတာတိုႚ၊ ဟိုအော် ဒီအော်နဲႚ တိုက်ုကီးတေကြို တနြ်းတာ တိုက်တာတြေ လုပ်ပၝတယ် (ရုပ်ရင်ြထဲမြာ)။ အခုအခဵိန်မြာတောူ့မန်မာူပည်က ဂေၞဇီလာ ဂဵပန်ူပည် ရောက်နေပၝူပီ။ သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံ ယဉ်ကေဵးမပြဒေသာကဇာတ်အဖြဲႚုကီးပေၝ့ဗဵာ။ူပက်လုံးတေကြ တခဵြိႚလူတေအြတကြ် မီးနဲႚမတ်ြခံလိုက်သလိုပၝပဲတဲ့။ လောင်မီးကဵ ကုန်တယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ တိုက်တေကြို တနြ်းမယ့်အစား တခဵြိႚလူတေကြို ဟန်ခဵက်တြေ ပဵက်ကုန်စေတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ သူတိုႚတေရြဲႚ အိုံပညာရဲႚ တနြ်းအားတေပြေၝ့ခင်ဗဵာ။ ယခုလည်း ဂဵပန်ူပည်ရောက်ူမန်မာတေအြတကြ် တတ်စမြ်းတဲ့အိုံပညာနဲႚ ဖေဵာ်ေူဖဖိုႚူပင်ဆင်နေတဲ့ ကိုဂေၞဇီလာနဲႚ စကားေူပာတော့ သူတိုႚအခု ခေတ်နဲႚ စနစ်နဲႚအညီ၊ အမီူဖစ်စေဖိုႚူပည်သူဆိံ္ဋခံယူရေးအတကြ် ဇာတ်ညနြ်းတြေ ရေးဆြဲနေူပီလိုႚ ဆိုပၝတယ်။ ၁၉၉၀ ခိုံစ်ြမဵားကိုံင်ငံရေးအေူခအနေကို ထင်ဟတ်ခဲ့တဲ့ သူတောင်းစားညီလာခူံပဇာတ်ုကီးကဲ့သိုႚ ပရိသတ်ပြဲကဵမယ့် အစီအစဉ်လိုႚ အရိပ်အူမကြ်ေူပာပၝတယ်။ သူကတော့ လဵြိႚ၀က်ြထားစေခဵင်တာ မိုးမခကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူေူပာတဲ့အတိုင်း အရိပ်အူမကြ် တင်ူပလိုက်ပၝတယ်။ အခု ခေတ်စားနေတဲိုံ့င်ငံတကာအေုကာင်းတေကြိုလည်း မဵက်ေူခမူပတ်ပၝဘူးတဲ့။ တရုတ်အိုလံပစ်အတကြ် မီးတုတ်ုကီး ထမ်ူးပီး သြားအုံးမြာလိုႚလဲ ဆိုလိုက်တော့ အိုလံပစ်ဂုဏ်ဆောင် မီးရြးတိုင်လား။ တရုတ်အိုလံပစ် သပိတ်အိုးကို မီးထိုးမယ့် မီးတုတ်လား ဆိုတာကတော့ ပြဲုကည့်မပြဲ သိုကရမြာူဖစ်ပၝတယ်။ူပည်တငြ်းက မလိုသူတေကြတော့ သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံ ကမ္တာပတ်နေတာကို မခံမရပ်ိုံင်ူဖစ်နေုကတယ်လိုႚ သိရပၝတယ်။ တခဵြိႚက အစဉ်အလာမရြိတဲ့အဖြဲႚ၊ သူတပၝးကို ပုတ်ခတ်ေူပာဆိုနေတဲ့ ဘာကောင်တေမြိုႚလဲ ဘာအိုံပညာသမားတေလြဲ လိုႚ ဆိုကတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ အဲဒီတော့ အခဵင်းခဵင်းတေကြပဲ တုန်ႚူပန်ုကတာက - ဟိုကူဖင့် ဘာမသြာ မဟုတ်တယ်။ ကမ္တာတောင် ပတ်နေူပီ။ ခင်ဗဵားလိုလူမဵြိးတေကြို ဘယ်သူကမြ ဘုရားဖူးတောင် ခေၞဖိုႚ မစဉ်းစားဘူးလိုႚူပန်ေူပာလိုက်လိုႚ လောင်မီးတြေ ကဵကုန်တယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံမန်မာယဉ်ကေဵးမအြဖြဲႚကိုပည်ပရောက်ူမန်မိာိုံင်ငံသားတေကြ ၀ိုင်းဝန်ုးကိဆြိုကူပီူးပည်သူဆိံ္ဋတေထြုတ်ဖော်ူပသလိုက်ုကဖိုႚ အခဵိန်ကောင်းပၝပဲလိုႚ ဆိုလိုက်ပၝရစေ။
စစ်အာဏာရင်ြတိုႚ၏ မင်းမဲ့စရိုက်၊ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရက်ြမမြဵားအောက်ကူမန်မာူပည်
စစ်အာဏာရင်ြတိုႚ၏ မင်းမဲ့စရိုက်၊ ဥပဒေမဲ့ ဆောင်ရက်ြမမြဵားအောက်ကူမန်မာူပည်ူပည်သူတိုႚရဲႚ စကာူးပန် တဦးဖေဖော်ဝၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မတရားမကြို စီရင်နေသည့် တရားရုံးမဵား ၁၉၆၂ ခုနစ်ြကတည်းက ကဵင့်သုံးနေသော အာဏာရင်ြလက်အောက်က တရားစီရင်ရေး စံနစ်ဆိုသည်က ဘယ်လောက် လတ်ြလပ်မမြဵား ရြိနေပၝသလဲ။ တရားခံမဵားဖက်က လိုက်လံဆောင်ရက်ြနေရသော ရြေႚနေမဵားမြာ အုကပ်အတည်းမဵြိးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရူပီး တရားလိုံငြ့် အစိုးရရြေႚနေမဵာိးံငြ့် တန်းတူ ဆက်ဆူံခင်း မခံရဘဲ တရားခံမဵားကဲ့သိုႚ ဖြိံပ်ဆက်ဆံခံနေရပၝတယ်။ တရားခံဘက်မြ ရြေႚနေိံငြ့် မိသားစုမဵားက တရားရုံး၏ အူပင်ဖက်တငြ် စောင့်ဆိုင်းနေုကရူပီး၊ တရားရုံးထဲတငြ် တရားသူုကီး၊ အစိုးရရြေႚနေ၊ တရားလိုပ သက်သေမဵား၊ ရဲမဵာိးံငြ့် ရ၀တမဵားက အူပည့် ၀င်ရောက်နေရာယူထာုးကတာကို တြေႚရပၝတယ်။ လတ်ြလပ်စြာ တရားစီရင်ရေး ဆိုသည်ကို တရားခံမဵားဖက်က မေးခနြ်းထုတ်ခငြ့် မရြိပၝ။ သူတိုႚတေတြောင်းတဲ့ မတ်ြပုံတင်၊ သန်းကောင်စာရင်းနဲႚ စာရက်ြစာတမ်းတြေူပနေရတာနဲႚပဲ တရားသူုကီးနဲႚ တြေႚခငြ့်တောင် ခက်ခဲအောင် လုပ်ထားပၝတယ်။ တရားခင်ြကိင်္စမဵားနဲႚ ဥပဒေရေးရာမဵားတငြ် တရားခံမိသားစုမဵားရဲႚ နားမလည်မမြဵား ရိုးသားမမြဵားကို လညြ့်စားအသုံးခဵူပီး ယုတ်မာနေုကတာလည်း တြေႚနေရပၝတယ်။ စက်တင်ဘာဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကီးထဲမြာ ရိုးသား စနြ်ႚစာုးကတဲ့ အူပစ်မဲ့တဲူ့ပည်သူတေကြို ဖမ်းဆီးထားတဲ့အူပင် မိသားစုမဵားက လာရောက် စုံစမ်းသည့်အခၝမြာ - ရဲမဵား၊ တရားရေးဝန်ထမ်းမဵား၊ ရ၀တမဵား၊ စစ်ဖက် ထောက်လမြ်းရေးမဵားက လိမ်ညာူပီးေူပာုကပုံက - အခုကိင်္စတေမြာ ကိုယ်က ရိုးရိုးသားသား လပ်ြရြားရင်း အဖမ်းခံရတာူဖစ်လိုႚ ရြေႚနေတြေ ငြားစရာမလိုေုကာင်း၊ တရားတဘောင်ထဲကေူဖရငြ်းနေစရာ မလိုေုကာင်း၊ူဖစ်သမ္တွကို အမဆြင်ထားသမ္တွကို ၀န်ခူံပီး မြားပၝတယ်။ တောင်းပန်ပၝတယ်လိုႚ ၀န်ခဵလိုက်ရင်ူပီးသြားမြာူဖစ်ေုကာင်း၊ အလကား သက်သက်မဲ့ အစိုးရကော မိသားစုတေပြၝ အလုပ်ပိုအောင် ရြေႚနေတြေ၊ူပင်ပက လူတြေ အဖြဲႚအစည်းတေကြို အကူအညီတောင်းစရာ ခေၞစရာ မလိုေုကာင်း စတဲ့ စကားလုံးတေနြဲႚ မိဘတြေ မိသားစုတေကြို လညြ့်ူဖာူးပီး ၎င်းတိုႚစိတ်တိုင်းကဵ အမဆြင် ထောင်ခဵနေုကတာူဖစ်ပၝတယ်။ သားသမီးနဲႚ မိဘတိုႚကို ရင်ြကြဲ သေကြဲ ခြဲနေသည့် စစ်အာဏာပၝးကက်ြသားမဵား ဒီူငိမ်းလင်းကို ဖမ်းဆီးစဉ်က အူဖစ်အပဵက်မဵားကို တင်ူပပၝမယ်။ စက်တင်ဘာ အရေးတော်ပုံအူပီး သူႚကို စရဖ လိုႚခေၞတဲ့ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီူးပီးနောက် စစ်ေုကာရေး ထုတ်ပၝတယ်။ သူႚကို တြေႚတြေႚခဵင်းမြာပဲ - မင်းက ငၝတိုႚ မဵက်ြိာံကို အိုးမည်းသုတ်တာပဲ။ ဒီတော့ မင်းက ခၝးပတ်ုကိက်ြသလား၊ လက်သီုးကိက်ြသလား လိုႚ မေူးပီး ခၝးပတ်ကိုဖတြ်ူပီး ရိုက်ဖိုႚႛ လုပ်တော့တာပၝပဲ။ သူ ဆိုလိုတာက ဒီူငိမ်းလင်း တိမ်းရြောင်နေစဉ် သူတိုႚ ဖမ်းဆီးဖိုႛုကြိးစားနေခဵိန်မြာ အုကိမ်ုကိမ်အလီလီူပည်သူမဵားက ကာကယ်ြပေးလိုႚ လတြ်ေူမာက်ခဲ့ရတာာတြေေုကာင့် အူငြိုးကီးစြာ ထာူးပီုးကိမ်းမောင်း ရိုက်ပုတ်တာူဖစ်ပၝတယ်။ မိဘတေကြ တိမ်းရြောင်နေရတဲ့ သားသမီးမဵားအပေၞထားတဲ့ မိဘမေတ္ဇာုကီးမားမတြေကြိုပၝ စော်ကားေူပာဆိုတာတေကြိုပၝ သူတိုႛက ကဵြးလန်ြလာုကပၝတယ်။ အဖသတ် ဇာတသတ်ပဲ ရြိတယ်။ အမိသတ် ဇာတသတ် မရြိဘူး။ မင်းအခုလို လုပ်နေတာတေဟြာ မင်းအမေကို သတ်နေတာနဲႚ အတူတူပဲ ဆိုပီး ကေဵာင်းသားလေးကို မဟုတ်မတရား စပ်ြစြဲပၝတယ်။ သိုႚသော် မိခင်ူဖစ်သူကိုတော့ - ခင်ဗဵားက သားကို နောက်ကနေေူမြာက်ပေးနေတာ။ူပီးတော့ ခင်ဗဵား သားနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်နေတာ ကဵပ်ြတိုႚ သိတယ် ဆိုပီး မိခင်ကိုပၝ စိတ်ထိခိုက်အောင်ေူပာဆို စစ်ဆေးတာတြေ လုပ်ပၝတယ်။ အင်းစိန်ထောင်ထဲမြာ ခဵပ်ြထားတဲ့ စည်သူမောင်ကိုလည်း တဦးတည်း ခဵပ်ြထာူးပီး ကိုယ်စိတ်ုကံ့ခိုင်ရေးတြေ ကဵဆင်းယုတ်လ္တွော့အောင် စိတ်ဓၝတ်စစ်ဆင်ရေးတြေ လုပ်ပၝတယ်။ မိဘတေနြဲႚ သူငယ်ခဵင်းတေကြိုလည်း လုပ်ုကံသတင်းတေပြေူးပီး သြေးကြဲအောင်၊ စိတ်ဝမ်းကြဲအောင် လုပ်ပၝတယ်။ သူတိုႚက ကောင်းကောင်းမန်ြမနြ် ဆြေးြေိံးခဵိန်မြာ စည်သူမောင်က ဆန်ႚကဵင်မတြေလြုပ်တယ်။ ဒၝေုကာင့် သူနဲႚအတူ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မိတ်ဆေတြေရြဲႚူငြိူငင်မတြေေုကာင့် သူတိုႚက ထိမ်းသိမ်းထားရတာူဖစ်တယ်လိုႚေူပာနေတာူဖစ်ပၝတယ်။ တရားလက်လတြ်၊ မင်းမဲ့စရိုက်မတြေ ကဵြးလန်ြနေတာ ဘယ်သူလဲူပည်သူလူထုက ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာမြာ တိုင်ူးပည်လတ်ြလပ်ရေးနဲႚ ဒီမိုကရေစီရေးအတကြ် တခဲနက် ဆိံ္ဋူပူပီး သဘောထားကို ထုတ်ူပန်ူပီးပၝူပီ။ ဒၝကို စစ်အစိုးရက သြေးေူမကဵအောင် ပစ်ခတ်ြိံမ်ိံငြ်းတဲ့အူပင် ခဵပြ်ြေိာံင်ခံထားရသူမဵားနဲႚ မိသားစုတေကြို အလုံးစုံသော ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမမြဵြိးစုံကဵရောက်အောင် ငရဲခန်းထဲ ပိုႚနေတာ ထင်ရြားလပြၝတယ်။ အမန်ြတရားနဲႚ တရားမ္တွတမအြတကြ် တိုက်ပြဲဝင်စိတ်တေကြို ကဵဆုံးပဵက်စီးအောင် စစ်အစိုးရက ခေဵမနြင်းခေဵနေပေမယ့် မီးနဲႚတိုက်လေလေ သံမဏိဓားသြားမဵားဟာ ပိုပိုပီး မာကေဵာထက်ူမက် သန်မာလေဆိုသလိုပဲူပည်သူလူထုရဲႚ စည်းလုံးညီညတ်ြမမြဵား ပို၍ ခိုင်မာူပီး စစ်အစိုးရရဲႚ နောက်ဆုံးနေႚက ပိုနီးလာလေလေူဖစ်လာမြာ မလြဲတော့ပၝ။ (သရုပ်ဖော်မြာ - ပန်းခဵီ ထိန်လင်းရဲႚ လက်ရာူဖစ်တယ်) Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook